အဆိုပါ ventral tegmental inရိယာ၌ dopaminergic အာရုံခံ၏ endogenous opioid- သွေးဆောင် neuroplasticity သဘာဝနှင့် opiate ဆုလာဘ် (2014) ကိုသြဇာလွှမ်းမိုး - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်အပေါ်
အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် dopaminergic အာရုံခံ၏ Endogenous opioid-သွေးဆောင် neuroplasticity ကသဘာဝနှင့် opiate ဆုလာဘ် (2014)
comments: အဆိုပါ DeltaFosB လေ့လာမှုများ ကျနော်တို့မကြာခဏအားလုံးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကိုးကား နျူကလီးယပ် accumbens လိင်မှုကိစ္စသည် meth & Cocaine ကဲ့သို့သော ဦး နှောက်ယန္တရားများနှင့်တူညီသည်။ ဒီတူညီတဲ့သုတေသီရဲ့မှတ်တိုင်လေ့လာမှုမှ (သဘာဝနှင့်ဆေးဝါးဆုလာဘ်တစ်ခု Key ကိုအာမခံ (2013) အဖြစ်ΔFosBနှင့်အတူဘုံဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောပလပ်စတစ်ယန္တရားများအပေါ်ဥပဒေ):
ထို့ကြောင့်သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုိုင်ရာဆုများသည်တူညီသောအာရုံကြောလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ပေါင်းစည်းရုံမျှမကမော်လီကျူးပြုသူနှင့်အတူတူပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် Nucleus Accumbens ရှိတူညီသောအာရုံခံဆဲလ်များ၌မက်လုံးများလွန်းခြင်းနှင့်အကျိုးစီးပွားနှစ်မျိုးစလုံး၏“ လိုလားခြင်း” ကိုလွှမ်းမိုးရန်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါပယ်ရှားတော်မူ: meth, ကိုကင်းများနှင့်လိင်အားလုံးသူတို့ဦးနှောက်ထဲမှာတခြားနေရာကွဲပြားခြားနားပြုစေခြင်းငှါသမျှအကျိုးကိုစင်တာ (နျူကလိယ accumbens) တွင်အတူတူပင်အာရုံကြောဆဲလ်မှတူညီသောအခြေခံအမှုအရာ, လုပ်ပါ။ ဒီသဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများယန္တရားများနှင့်ဆိုးကျိုးများအတွက်ကွဲပြားသောပုံမှန်ထက်စကားပြောအမှတ်ဖျက်သိမ်း။
ဤလေ့လာမှုအသစ်သည် VTA အားမည်သို့ပြုသည်ကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ dopamine ထုတ်လုပ်သည့်အာရုံကြောဆဲလ်များစတင်နေရာ၌ VTA သည်၎င်းသည်နျူကလိယ accumbens၊ frontal cortex နှင့် amygdala သို့ခွဲသွားသည်။ အခြေခံအားဖြင့် VTA သည်ငါတို့ dopamine အများစု၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ဆုလာဘ် circuit ၏ဤပုံ2ကိုကြည့်ပါ: Pic1, Pic2
သုတေသီများလိင် (ထှတျအထိပျ) (ယောက်ျား၌) ယာယီကျုံ့ဖို့ VTA အတွက်ဆဲလ်အသေကောင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ cell အလောင်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ dendrites ဦးနှောက်၏မီးခိုးရောင်ကိစ္စပါဝင်သည်။ ဤသည်ဘိန်းဖြူစွဲသည့် VTA (ဘိန်းဖြူမဟုတ်တဦးတည်းအချိန်အသုံးပြုမှု, ဒါပေမယ့်နာတာရှည်ဘိန်းဖြူသုံးစွဲခြင်း) ကိုမအတိအကျအရာဖြစ်တယ်။ အဆိုပါ VTA ဆဲလ်အသေကောင်၏ဤတူညီသောကျုံ့သတိပြုပါ လူ့ဘိန်းဖြူစွဲများတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်.
အဆိုပါလိင်-သွေးဆောင်ဆဲလ်ကျုံ့မှာအနည်းဆုံး7နေ့ရက်ကာလအဘို့ကြာရှည်ခံသည်။ လိင်အားဖြင့်သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများ 30 ရက်ပေါင်းမှာပုံမှန်ပြန်ရောက်ခဲ့ပေမယ့်သုတေသီများသာရက်ပေါင်း 1,7နှင့် 30 အကဲဖြတ်။
ဘိန်းဖြူစွဲခြင်းဖြင့်ဆဲလ်အလောင်းများ၏ကျုံ့မှုကနျူကလိယအတွင်းရှိ dopamine နိမ့်သည်ဖြစ်စေ၊ desensitization. သုတေသီများက (လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်) သူတို့၏တုံ့ပြန်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ကြွက်များအားမော်ဖင်းအကိုက်ကိုစီမံခဲ့သော်လည်းဘာမျှမဖြစ်ခဲ့။ များသောအားဖြင့်ကြွက်များသည်မော်ဖင်းအကိုက်ကိုနှစ်သက်ကြသည်၊ သို့သော်ဤနေရာတွင်သူတို့သည်ခေတ္တစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်သွားသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်, သုက်လွှတ်ပြီးနောက်ကြွက်များ၏ဆုလာဘ် circuit ကိုဘိန်းဖြူ၏အနိမ့်အဆင့်ကိုတုံ့ပြန်မှုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သုတေသီများကပုံမှန်ပုံမှန်ကြွက်များတုန့်ပြန်မှုရရှိရန်မြင့်မားသောဆေးများလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းကြသည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် - လိင် (ခေတ္တယာယီ) သည် VTA တွင်အလားတူပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘိန်းဖြူစွဲခြင်းကဲ့သို့သော dopamine ထုတ်လုပ်သောအာရုံကြောဆဲလ်အလောင်းများကျုံ့ခြင်း။ ၎င်းသည်ဆုချီးမြှင့်သည့်နေရာတွင် dopamine ကိုပိုမိုနိမ့်ကျစေပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတုန့်ပြန်မှုနည်းပါးပြီးကြွက် ဦး နှောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အနည်းဆုံး ၇ ရက်ကြာသည်။
J ကို neuroscience ။ 2014 Jun 25;34(26):8825-36။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.0133-14.2014 ။
အိုး KK1, Coppens CM2, Beloate LN3, ခဝါသည် J ကို2, ဗန် S က2, Frohmader KS2, Laviolette SR2, Lehman MN4, Coolen LM5.
အလွဲသုံးစားမှုသဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး mesolimbic လမ်းကြောင်းအပေါ်ဆုံနှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်အာရုံကြော plasticity ၏ဘုံယန္တရားကိုသက်ဝင်။ opiates မှနာတာရှည်ထိတွေ့မော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်သည်းခံစိတ်ကိုထိန်းညှိပေးသော ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) ၏ dopaminergic အာရုံခံအတွက် plasticity ဖြစ်ပေါ်သည်။
ဤတွင်ကျနော်တို့ VTA အတွက် endogenous opioids ၏မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်လွှတ်ပေးရေးအတွက်အလှည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်အားဖြည့်များ၏ရေရှည်စကားရပ်ကိုထိန်းညှိပေးသောအထီးကြွက်များတွင် VTA dopamine ဆဲလ် morphological အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်စေသည်သော။ အဆိုပါယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်
ပထမဦးစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ 1 နှင့်7ရက်ပေါင်း VTA dopamine Soma အရွယ်အစားလျော့နည်းသွားပေမယ့်မပေး 30 ရက်နောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုပြီးနောက်. ဒီအကြိုးသကျရော naloxone နှင့်အတူပိတ်ဆို့ခဲ့သည် တစ်ခုချင်းစီကိုမိတ်လိုက် session တစ်ခုမတိုင်မီ; ထို့ကြောင့်ဤ VTA dopamine ဆဲလ် plasticity endogenous opioids ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မှီခိုခဲ့သည်။
လိင်ကြုံတွေ့အထီး 0.5 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်မော်ဖင်းအကိုက်အဘို့အခွအေနမြေားရာအရပျ preference ကိုဖွဲ့စည်းရန်မပြုခဲ့အဖြစ်အလှည့်၌, VTA plasticity, ပြောင်းလဲ opiate ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်သူက endogenous opioid အရေးယူအတွေ့အကြုံ, ဖြစ်စေ system သို့မဟုတ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA အဖော်ရှာစဉ်အတွင်း naloxone နဲ့ကုသအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များနှင့်မှတ်ဉာဏ် mediates ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ Naloxone ဟာထပ်ခါတလဲလဲမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကျော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ကနဦးအတှေ့အကွုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုး, ဒါမှမဟုတ်မိတ်လိုက်ဘို့အခွအေနမြေားရာအရပျ preference ကိုမတားဆီးခဲ့ပါဘူး။ သို့သော် naloxone ကုသမှုမိတ်လိုက်-ဆက်စပ်အေးစက်တွေကိုအားဖြင့်သွေးဆောင် mesolimbic ဒေသများရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အာရုံကြော activation ၏အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးများ၏ရေရှည်စကားရပ် attenuated.
အတူတူအဲဒီဒေတာမိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်း endogenous opioids မော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်နှင့်သဘာဆုလာဘ်အပြုအမူများအတွက်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်များအတွက်အရေးပါပေါ်လာကြောင်း VTA dopamine အာရုံခံအတွက်အာရုံကြော plasticity သွေးဆောင်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
သဘာဝဆုလာဘ်အပြုအမူတွေကို (mesocorticolimbic သည့်စနစ်ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်Meisel နှင့် Mullins, 2006; Hoebel et al ။ , 2009; Frohmader et al ။ , 2010a; အိုး et al ။ , 2010a; လူငယ်တို့ et al ။ , 2011; Blum et al ။ , 2012) ။ In-အလှည့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စကားရပ်အထောက်အကူပြုသောဤစနစ်တွင်အလွဲသုံးစားမှုအကြောင်းမရှိအာရုံကြောကိုပြောင်းလဲ၏မူးယစ်ဆေးဝါး (Hyman et al ။ , 2006; Nestler, 2012) ။ ကျနော်တို့အရင်က, ဆိုလိုသည်မှာ, သဘာဝဆုလာဘ်အပြုအမူနှင့်အတူအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကအတွေ့အကြုံပြဋ္ဌာန်းလည်း (တိုးလာ dendritic ကျောရိုးအပါအဝင်နျူကလိယ accumbens (NAc) တွင်အာရုံကြော plasticity ဖြစ်ပေါ်စေသည်အိုး et al ။ , 2010a) နှင့် deltaFosB (အိုး et al ။ , 2013) ။ in-အလှည့်, ဒီလိင်-သွေးဆောင် plasticity, နောက်ဆက်တွဲမိတ်လိုက်အပေါ်လိင်အတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်အရေးကြီးသည် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များပံ့ပိုးကူညီခြင်းအဖြစ်ထင်ရှားအိုး et al ။ , 2010b, 2012, 2013) ။ ထိုမှတပါး, လိင်အတွေ့အကြုံကို locomotor လှုပ်ရှားမှုအာရုံခံစားမှုနှင့်တိုးမြှင်ဆုလာဘ် (အပါအဝင် psychostimulants မှတုန့်ပြန်ပွောငျးလဲFrohmader et al ။ , 2010a; အိုး et al ။ , 2010a, 2013).
အဆိုပါ NAc အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) အတွက် dopaminergic အာရုံခံများထဲမှမြစ်အောက်ပိုင်းပစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ VTA dopamine အာရုံခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် Conditions တွေကို (ထိတွေ့အဖော်ရှာခြင်းနှင့်အောက်ပါစဉ်အတွင်း activated နေကြတယ်Balfour et al ။ , 2004; Frohmader et al ။ , 2010a;), endogenous opioid peptide (EOP) မှတဆင့်μ-opioid receptors (Morse မှာ -binding မဿဲနှင့်ဂျာမန်, 1984; ဂျွန်ဆင်နှင့်မြောက်, 1992; Klitenick et al ။ , 1992; Ikemoto et al ။ , 1997; Balfour et al ။ , 2004) ။ ထို့ကြောင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် Conditions တွေကိုထိတွေ့ EOP ၏ဖြန့်ချိခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ရာ VTA dopamine-ဆဲလ် activation, (မစ်ချယ်နှင့် Stewart က, 1990; ဗန် Furth et al ။ , 1995; ဗန် Furth နှင့်ဗန် Ree, 1996အဆိုပါ NAc အတွက်) နှင့် dopamine လွှတ်ပေးရေး (Fiorino et al ။ , 1997).
exogenous opiates မှထပ်ခါတစ်လဲလဲထိတွေ့မှု (ထို VTA အတွက် morphological အပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်Mazei-Robison et al ။ , 2011; Mazei-Robison နှင့် Nestler, 2012VTA dopamine အာရုံခံ၏), လျှော့ချ Soma အရွယ်အစား (Sklair-Tavron et al ။ , 1996; Spiga et al ။ , 2003; Chu et al ။ , 2007; Russo et al ။ , 2007; Mazei-Robison et al ။ , 2011), (neurofilament ပရိုတိန်း၏အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့Beitner-ဂျွန်ဆင် et al ။ , 1992), (dopamine ဆဲလ်၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တိုးတက်သဖြင့်, NAc မှ axoplasmic သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် dopamine output ကိုလျှော့ချBeitner-ဂျွန်ဆင် et al ။ , 1992; Mazei-Robison et al ။ , 2011) ။ သူတို့မူးယစ်ဆေး abstinence ၏တစ်လအတွင်းငျ့သှားအဖြစ်ဤအ VTA dopamine အာရုံခံဆဲလျအပြောင်းအလဲများကို (မော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်သည်းခံစိတ်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်ယာယီများမှာRusso et al ။ , 2007) ။ ဒါဟာ VTA dopamine အာရုံခံအတွက် plasticity opiates ၏လုပ်ရပ်များမှထူးခြားသောဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့မှာလည်းသဘာဝအလျောက်ကြိုးအပြုအမူတွေစဉ်အတွင်း EOP များလွှတ်ပေးရန်ဖြင့်ထုတ်လုပ်လျှင်ရှိမရှိလက်ရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင်ကျနော်တို့ကသဘာဝဆုလာဘ်အတွေ့အကြုံကို opiates သဘာဝကဆုလာဘ်အပြုအမူနှင့်ဆုလာဘ်မှတ်ဉာဏ်များအတွက်အရေးပါသော plasticity ယန္တရားအပေါ်ဆုံအကြောင်း, အရှင် opiates ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်းမှ neuroplasticity အလားတူဖြစ်ပေါ်စေသည်, နှင့်သောအယူအဆစမ်းသပ်ရန်။ ကျနော်တို့အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ VTA အတွက် EOP အရေးယူမှုအပေါ်မှီခိုနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမှတဆင့် VTA dopamine အာရုံခံ၏ Soma အရွယ်အစားကိုလျော့နည်းစေခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်ရန်။ ထို့အပွငျ, ငါတို့မော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်မှ Cross-သည်းခံစိတ်ဖြစ်စေတဲ့စဉ် VTA dopamine အာရုံခံအတွက် EOP-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲ, သဘာဝကြိုးအပြုအမူများအားဖြည့်နှင့်သဘာဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်တွေကိုမှမက်လုံးပေး salience များ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး Sprague-Dawley ကြွက် (200-225 ဆ) တစ်ဦး 12 ဇအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာအပေါ်ချားလ်စ်မြစ်မှရယူသူတွေဟာသက်ရောက်စေခန်းထဲမှာအားလုံး၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်အားလုံးစမ်းသပ်ချက်အတွက် (10 မှာချွတ်ထွန်း: 00 လေးဟာမော်ဖင်းအကိုက်သည်းခံစိတ်စမ်းသပ်မှု မှလွဲ. )5pm တွင်: 00 မှာချွတ်ထွန်း။ အစားအစာနှင့်ရေရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည် ကြော်ငြာ libitum အမူအကျင့်ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း မှလွဲ. ။ stimulus အမျိုးသမီး ovariectomized တို့ 5% 17-β-estradiol benzoate SILASTIC တောင့ (1.98 မီလီမီတာအတွင်းအချင်း, 0.5 စင်တီမီတာအရှည်, Dow-Corning) နဲ့အရေပြားအောက်ဆုံးကိုထညျ့သှငျး။ ချို့ယွင်းသော (အရေပြားအောက်ဆုံး, နှမ်းဆီ 500 ml အတွက် 0.1 μg) ၏ထိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception သွေးဆောင်စမ်းသပ်မတိုင်မီ 3-6 ဇအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးအနောက်တိုင်းအွန်နှင့်မီချီဂန်တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုကော်မတီများတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ကအတည်ပြုခြင်း, တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်သုတေသနအတွက်ကျောရိုးရှိသတ္တဝါတိရိစ္ဆာန်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်များအမျိုးသား Institutes အပေါ်ကနေဒါကောင်စီတညီတည်းခဲ့ကြသည်။
VTA dopamine Soma အရွယ်အစားအပြောင်းအလဲများအချိန်သင်တန်း
အဆိုပါ VTA အတွက် dopamine အာရုံခံဆဲလျ Soma အရွယ်အစားအပြောင်းအလဲများကို၏အချိန်သင်တန်းလေ့လာဖို့, လိင်အတွေ့အကြုံနှင့်နုံတိရိစ္ဆာန်များ (1, 7, ဒါမှမဟုတ် 31 ဃမှာသေဆုံးခဲ့သည်n = အုပ်စုကိုနှုန်း 5-8)) (အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အဖော်ရှာသို့မဟုတ်) (နုံကိုင်တွယ်၏နောက်ဆုံးတစ်နေ့ပြီး။ လိင်ကြုံတွေ့အုပ်စုများနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုအတွင်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်ကိုက်ညီအဖြစ်ငါးအစည်းအဝေးများ (တစ်ဦးချင်းစီအုပ်စု5၏ပျှမ်းမျှ) ကျော်သုက်စုစုပေါင်းဂဏန်းနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမဆို parameter သည်အတွက်ကွာခြားခဲ့ပါဘူးခဲ့ကြသည်။
လိင်နုံသို့မဟုတ်လိင်အတွေ့အကြုံရ: လိင်နုံယောက်ျားနှစ်ဦးကိုစမ်းသပ်အခြေအနေတစ်ခုခုမှတာဝန်ကျတယ်။ လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များ (60 × 45 × 50 စင်တီမီတာ) သုတ်ရည်လွှတ်၏ display ကိုသည်အထိသို့မဟုတ် (ပထမဦးဆုံးသို့ရောက်လာသည်ကိုမဆို) 1 ဇမှတက်စတုဂံစမ်းသပ်လှောင်အိမ်ထဲမှာလက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူရက်ဆက်တိုက်အပေါ်ငါးကြိမ်မိတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ လှောင်အိမ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် 70% အီသနောဖြေရှင်းချက်များနှင့်လတ်ဆတ်သောအိပ်ယာနှင့်အတူသန့်စင်ခဲ့ကြမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများအကြားထည့်သွင်းခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအမှောင်ထဲမှာအဆင့် (မှောင်မိုက်၏စတင်ခြင်းပြီးနောက် 2-6 ဇ) စဉ်အတွင်းဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ငါးမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများအနည်းဆုံးလေးအတွင်းမှာ ejaculated သာတိရိစ္ဆာန်များလိင်ကြုံတွေ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ချက်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ အားလုံးမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ တောင်ပေါ်မှာအရေအတွက် (M) intromissions (IMS), (ML; အမျိုးသမီး၏နိဒါန်းအနေဖြင့်အချိန်ပထမဦးဆုံး mount မှ) အောင်းနေချိန် mount, intromission အောင်းနေချိန် (IL; ပထမဦးဆုံး intromission မှအမျိုးသမီးများ၏နိဒါန်းကနေအချိန်), နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန် (EL; ပထမဦးဆုံးအ intromission ကနေသုတ်ရည်လွှတ်ဖို့အချိန်) (မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်Agmo, 1997) ။ နုံတိရိစ္ဆာန်များကြုံတွေ့ယောက်ျားအဖြစ်သူတို့ဝေးကွာသောအမျိုးသမီးအနံ့ထိတွေ့ခဲ့ထိုကဲ့သို့သော, တူညီတဲ့ခန်းထဲမှာအဖော်ရှာလိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားနဲ့အတူတစ်ပြိုင်နက်တည်း 1 ဇဘို့စင်ကြယ်စမ်းသပ်လှောင်အိမ်ထဲတွင်နေရာနှင့်နှောင့်အယှက်များနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အသစ်အဆန်းအလားတူအဆင့်ဆင့်ခဲ့ကြသည်။
နဲ့ Immunofluorescence တံဆိပ်ကပ်ခြင်း။
တိရစ္ဆာန်များနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆိုဒီယမ် pentobarbital သုံးပြီး anesthetized ခဲ့ကြသည် (270 / ကီလိုဂရမ်, ip mg) နှင့် 50 မီတာဆိုဒီယမ်ဖော့စဖိတ်ကြားခံ (PB) တွင် 0.9% paraformaldehyde ၏ 500 ml အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် 4% ဆား၏ 0.1 ml နှင့်အတူ intracardially perfused ။ ဦးနှောက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အတူတူပင် fixative အတွက်အခန်းအပူချိန် (RT ကို) မှာ 1 ဇများအတွက် postfixed, ပြီးတော့ 20% sucrose နှင့် 0.01 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိုလှောင် 0.1 မီတာ PB အတွက် 4% ဆိုဒီယမ် azide ကိုစွဲလန်းနှစ်သက်ခဲ့ကြသည်။ မှု Coronal ကဏ္ဍများကိုတစ်ဦးအေးခဲနေသော microtome (H35R, Microm) ရက်နေ့တွင် 400 μmမှာဖြတ်ခဲ့ကြပြီးတော့ 30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထား cryoprotectant ဖြေရှင်းချက်လေးအပြိုင်စီးရီး (30% sucrose, 0.1 မီတာ PB အတွက် 20% Ethylene glycol) တွင်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အားလုံးပေါက်ဖွားပေါက်ဖွားအကြား, နူးညံ့သိမ်မွေ့လှုံ့ဆော်မှုနှင့် 0.1 မီတာ PBS, သော pH 7.35 နှင့်အတူ copious လြျှောနှင့်အတူ RT ကိုမှာဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ကဏ္ဍများ% H ကို 1 ထိတွေ့ခဲ့သည်2O2 နှင့် 10% bovine သွေးရည်ကြည် albumin (Jackson က Immuno သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်း);: 1 မိ endogenous peroxidases ဖျက်ဆီးဖို့အတှကျ, ထို့နောက် (Sigma-Aldrich 0.4% ထရီ X-100်PBS PBS +) ပေါက်ဖွားဖြေရှင်းချက်ထဲမှာ 0.1 ဇများအတွက်ပိတ်ဆို့။ ယင်းနောက်ကဏ္ဍများကိုမောက် tyrosine hydroxylase (TH) -antibody (1 အတွက် RT ကိုမှာနေ့ချင်းညချင်းနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်: 20 000; Millipore) ။ 555 မိဘို့; မူလတန်း antibody ကိုပေါက်ဖွားပြီးနောက်, အပိုင်း AlexaFluor 1-conjugation ဆိတ်သငယ်ကိုဆန့်ကျင် mouse ကို antibody ကို (Invitrogen, Eugene, OR 100 30) နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကဏ္ဍများ 0.1 မီတာ PB နှင့်အတူဆေးကြောခဲ့ကြ, အခြောက်လှန်း, Superfrost Plus အားဖန်ဆလိုက်ပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားသဖြင့်, Anti-နွမ်းအေးဂျင့် 1,4-diazabicyclo (2,2) ကထုတ်တဲ့ (DABCO်gelvatol နှင့်အတူ coverslipped; 50 မီလီဂရမ် / ml, Sigma-Aldrich; Lennette, 1978).
ဒေတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: အာရုံခံဆဲလျ Soma အရွယ်အစား။
အဆိုပါ VTA အတွက် TH-immunoreactive ၏ပုံများ (IR) အာရုံခံ (caudal အဆင့်သုံး rostral မှာချဲ့× 40 မှာခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်Balfour et al ။ , 2004) ။ မတူညီသောအဆင့်ဆင့်မှာဆဲလ်တွေအကြားတွေ့ရှိခြင်းမရှိကွဲပြားမှုရှိခဲ့သည်။ TH-မှာ IR အာရုံခံ၏ Soma အရွယ်အစား ImageJ (ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institutes) သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အားဖြင့်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဧရိယာပတ်လည်အတိုင်းအတာများနှင့်မြို့ပတ်ရထားတိုင်းတာခဲ့ကြသည်ဆိုလို Sklair-Tavron et al ။ (1996)။ တိရိစ္ဆာန်နှုန်း 25 ဆဲလ် (ပေါင်းစပ်အားလုံး3VTA အဆင့်ဆင့်) ၏ပျမ်းမျှဆန်းစစ်ခဲ့ပြီးတစ်ဦးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်နျူကလိယနှင့်အတူသာဆဲလ်တွေထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်အဘို့, ယုတ်ဧရိယာပတ်လည်အတိုင်းအတာများနှင့်မြို့ပတ်ရထားတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ နောက်တွင်: စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက် Two-လမ်း ANOVA [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ (လိင်ကြုံတွေ့သို့မဟုတ်လိင်နုံ) နှင့်အချိန် (1, 7, ဒါမှမဟုတ် 31 ဃ) အချက်များ] အသုံးပြုခဲ့သည် post ကို hoc 0.05 တစ်အရေးပါမှုအဆင့်ကိုအတူ Holmes-Sidak နည်းလမ်းကိုသုံးပြီးနှိုင်းယှဉ်။
VTA Non-dopamine အပြောင်းအလဲများ
နေ့စဉ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံက TH-မှာ IR အာရုံခံဆဲလျ Soma အရွယ်အစားလျှောက်လျော့နည်းဘို့လိုအပ်ပါသည်ရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့, ငါးခြားမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်း mated ခဲ့ကြောင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ VTA dopamine အာရုံခံဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများပေမယ် 2.5 ရက်သတ္တပတ်တစ်ဦးကျြောကာလအတှငျးရှိကြ၏။ ဦးနှောက်နောက်ဆုံးမိတ်လိုက်သို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်ပြီးနောက်7ဃစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင်ကြောင့် immunoperoxidase နှင့် chromogen ထောက်လှမ်းနှင့်အတူအထိခိုက်မခံအစွန်းအထင်းနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. ရှိမရှိစမ်းသပ်ပြီးခဲ့လည်း TH-မှာ IR Soma အရွယ်အစားအပြောင်းအလဲများကို၏ visualization ဘို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ Perfusion နှင့်တစ်ရှူးအပြောင်းအလဲနဲ့အကငျြ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ 1% H ကိုအတူကုသမှုအောက်ပါ2O2 နှင့် PBS + ကဏ္ဍများကိုမောက် polyclonal tyrosine hydroxylase (TH) -antibody (1 အတွက် RT ကိုမှာနေ့ချင်းညချင်းနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်: 20 000; Millipore) ။ , avidin-ဓါတ်-horseradish peroxidase (1 ဇ, ABC ရုပ်သံအထက်တန်းလွှာ; 1;: (Vector Laboratories PBS + အတွက် 500 1 ဇ, 1): PBS အတွက် 1 000 မူလတန်း antibody ကိုပေါက်ဖွားပြီးနောက်, အပိုင်းဓါတ်-conjugation ဆိတ်သငယ်ကိုဆန့်ကျင်ယုန် IgG နှင့်အတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် ; Vector Laboratories), နှင့် 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (10 မိ, 0.02%, DAB, ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် (0.02%) နှင့်အတူ 0.1 မီတာ PB အတွက် (0.015%) အတွက်နီကယ် sulfate နှင့်အတူတိုးမြှင် Sigma-Aldrich) ။ ကဏ္ဍများ ddH အတွက် 0.1% gelatin နှင့်အတူ (Fisher က) ကိုတုံ့ပြန်မှုအဆုံးသတ်ခြင်းမှ 0.3 မီတာ PB အတွက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆေးကြောခြင်းနှင့် coded Superfrost ပေါင်းဖန်ဆလိုက်ပေါ်သို့တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်2O. ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ပြီးနောက်အားလုံးဆလိုက် DPX mountant (dibutyl Phthalate xylene; Sigma-Aldrich) နဲ့ coverslipped ခဲ့ကြသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း TH-IR ဆဲလ်များကိုareaရိယာ၊ ပတ်လည်အတိုင်းအတာနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် sustia nigra (SN) ရှိ TH-IR ဆဲလ်များကို VTA TH-IR ဆဲလ်များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရာတွင်အသုံးပြုသောတူညီသောကဏ္inများတွင်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် VTA နှင့် SN TH-IR ဆဲလ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်အပိုင်းများကို cresyl violet သုံး၍ တားမြစ်ထားပြီး non-TH-IR ဆဲလ်များကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်နည်းတူအသုံးပြုခဲ့သည်။ အတွေ့အကြုံရှိအုပ်စုများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိအုပ်စုများအကြားခြားနားချက်များကိုအမြီးနှစ်ချောင်းရှိသောကျောင်းသားကို အသုံးပြု၍ နှိုင်းယှဉ်သည် t 0.05 တစ်အရေးပါမှုအဆင့်စမ်းသပ်မှု။
အတှေ့အကွုံ-သွေးဆောင် dopamine Soma အရွယ်အစားလျှော့ချရေးအပေါ် naloxone ၏ဆိုးကျိုးများ
Morse dopamine အာရုံခံဆဲလျ Soma အရွယ်အစားလိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများအတွက်အခန်းကဏ္ဍကစားရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, Mor လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းပိတ်ဆို့ခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်၏ထက်ဝက်အခြားတစ်ဝက်ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်သော်လည်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့ပေမယ့်လိင်နုံနျြရစျ။ လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များ5ရက်ဆက်တိုက်အပေါ်မိတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ အမျိုးသမီး (အတွေ့အကြုံရှိ) ၏မိတ်ဆက်မတိုင်မီသို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်မတိုင်မီသို့မဟုတ်ဆား 10 မိ၏လိင်ကြုံတွေ့နှင့်နုံအုပ်စုများအတွင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် nonselective Mor ရန် naloxone နဲ့ကုသခံခဲ့ရသည် (0.9% ဆားအတွက်ဖျက်သိမ်း Sigma-Aldrich, 30 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, SC) (နုံ); ထိုသို့သောအားဖြင့်လေးစမ်းသပ်အုပ်စုများကို: လိင်နုံဆား (နုံ Sal), လိင်နုံ naloxone (နုံ NLX), လိင်ကြုံတွေ့ဆား (Exp Sal), နှင့်လိင်ကြုံတွေ့ naloxone (Exp NLX; n အုပ်စုတစ်စုနှုန်း = 5-8) ။ Naloxone ကုသ5ဃမဆိုပေါ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမဆို parameter သည်ပေါ်ကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများရှိသည်မဟုတ်ခဲ့သလဲ, naloxone- နှင့်ဆား-ကုသအုပ်စုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအတွက်တူညီခဲ့ကြသည်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုပြီးနောက် intracardial perfusion7ဃကနေတဆင့်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။ Sectioning, immunohistochemistry နှင့်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (Two-လမ်း ANOVA; အချက်များ: လိင်အတွေ့အကြုံနှင့်မူးယစ်ဆေးကုသမှု) အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ dopamine Soma အရွယ်အစားအဘို့ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
မော်ဖင်းအကိုက် conditional ရာအရပျ preference ကို
ယခင်က Russo et al ။ (2007) နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်မော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်မှသည်းခံစိတ် induces ပြသခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်အတွက် VTA အတွက် dopamine အာရုံခံ၏ Soma အရွယ်အစားတူညီလျှောက်လျော့နည်းစေကတည်းကလိင်-သွေးဆောင် morphological အပြောင်းအလဲများကို၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်စပ်မှုမော်ဖင်းအကိုက်အကျိုးသည်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ လိင်ကြုံတွေ့နှင့်နုံတိရိစ္ဆာန်များ (ခြောက်လကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်အုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့သည်n = လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အခြေခံပြီး 9-13 အုပ်စုတစ်စုနှုန်း) (လိင်နုံသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိ) နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ထိုး (0.5, 5.0, ဒါမှမဟုတ် 10.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) အတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့်မိတ်လိုက် session တစ်ခုနှင့်အုပ်စုများကနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုအတွင်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အဘို့အလိုက်ဖက်ပြီးအေးစက် 1 ဃရာအရပျကိုယူ။ အဆိုပါအသုံးပြုသော CPP ကပါရာဒိုင်းတစ် pretest, အေးစက်ရက်နှင့် Post-စမ်းသပ်ပါဝင်သည်နှင့်ယန္တရားအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည် Tenk et al ။ (2009)။ အချုပ်အားဖြင့် CPP ယန္တရား (MED Associates) တွင်သီးခြားအခန်းသုံးခန်းပါဝင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို session တစ်ခုအကြား, ယန္တရားနှံ့နှံ့စပ်စပ် olfactory တွေကို minimize လုပ်ဖို့ 70% အီသနောဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သန့်စင်ခဲ့သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီ၏ ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုများကိုဆုံးဖြတ်ရန်တိရစ္ဆာန်များအားယန္တရားတစ်ခုလုံးကို ၁၅ မိနစ်အခမဲ့ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည့်အကြိုစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုတစ်ခုအနေနှင့်တိရိစ္ဆာန်များသည်တိကျသောအခန်းအတွက်သိသာထင်ရှားသော ဦး စားပေးမှုမပြခဲ့ပါ၊ သို့သော်တစ် ဦး ချင်းစီသည်ကန ဦး ဦး စားပေးအနည်းငယ်သာရှိသည်။ စာမေးပွဲကာလအတွင်းအခန်းတစ်ခန်းအတွက် (သိသိသာသာအခန်းပေါင်းတစ်ခုစီ၌အချိန်နှင့်ကွာခြားချက်> 15 s ခြားနားချက်; တိရိစ္ဆာန်များ၏ <200%) ကိုသိသိသာသာကြိုက်ကြောင်းကြွက်များကိုလေ့လာမှုမှဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်။ အေးစက်နေစဉ်ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသည်ဘက်မလိုက်ပါ ၀ င်မှုကိုအသုံးပြုပြီးကန ဦး ဦး စားပေးရွေးချယ်ထားသော (သို့) ကြိုတင်၍ မဟုတ်သောအခန်းနှင့်တွဲဖက်ထားသည် (Tzschentke, 2007) နှင့်တိရိစ္ဆာန်များ 30 မိများအတွက်အခန်းများမှချုပ်ထားခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များတို့သည်နံနက် (9 AM 00 မှ: 12 00 pm တွင်) တွင်ဆား (ip) နဲ့ထိုးသွင်းခဲ့ကြခြင်းနှင့်ဆား-တွဲအခန်းထဲက (ထိန်းချုပ်မှု) ကိုချုပ်ထား။ နေ့လည် (1-00:400 pm တွင်) ခုနှစ်တွင်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြ (ip, 0.5 / ကီလိုဂရမ် mg, 5.0 / ကီလိုဂရမ် MG သို့မဟုတ် 10.0 / ကီလိုဂရမ် mg; မော်ဖင်းအကိုက် sulfate 0.9% ဆား, ဂျွန်ဆင် Matthey အတွက်ဖျက်သိမ်း) နှင့်ချုပ်ထား ယင်းမော်ဖင်းအကိုက်-တွဲအခန်းထဲကရန်။ တိရစ္ဆာန်များနှစ်ခုအေးစက်ရက်ပေါင်းအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ နက်ဖြန်နေ့၌ (မိတ်လိုက်၏နောက်ဆုံးသောနေ့၌ပြီးနောက်3ဃ) တစ် Post-စမ်းသပ်မှုသည် pretest ဖို့လုပျထုံးလုပျနညျးတူညီ, ကောက်ယူခဲ့သည်။ Post-စမ်းသပ်တစ်စုံကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦးချင်းစီသောက်သုံးသောအတွင်းလိင်နုံသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိယောက်ျားများအတွက် Post-စမ်းသပ်ကာလအတွင်းဆား-တွဲအခန်းကုန်သည့်အချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်စဉ်အတွင်းမော်ဖင်းအကိုက်-တွဲအခန်းသုံးစွဲစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အချိန်များအတွက် t စမ်းသပ်။ p <0.05 ကစာရင်းအင်းသိသိသာသာစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနုံချိ။ အတွေ့အကြုံရှိသောတိရိစ္ဆာန်များအားထပ်မံထိန်းချုပ်သောအုပ်စုများသည်တွဲဖက်ထားသောနှင့်မတွဲဖက်သောအခန်းနှစ်ခုလုံးတွင်အနှုတ်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ဆားများကိုရရှိခဲ့သည်။ မည်သည့်အုပ်စုအတွက်မျှအခန်းများအကြားအချိန်ကွာခြားမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးအပေါ်စနစ်တကျ naloxone ၏ဆိုးကျိုးများ
အနည်းဆုံးအား 1 တစ်လထိန်းသိမ်းထားကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပံ့ပိုးကူညီခြင်းအတွက်လိင်အတွေ့အကြုံကိုရလဒ်များကို (အိုး et al ။ , 2012) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးအပေါ် Mor ပိတ်ဆို့ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်, လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များ (ငါးနှစ်ဆက်တိုက်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများမတိုင်မီ naloxone သို့မဟုတ်ဆားဖြစ်စေလက်ခံရရှိn = 12 တစ်ခုချင်းစီ) အဖြစ်အထက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်ကနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုပြီးနောက်တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုအားလုံးတိရိစ္ဆာန်များတဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်သည်အထိသို့မဟုတ် 1 ဇမှတက်မိတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်ထားတဲ့ကာလအတွင်းကောက်ယူခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမ naloxone သို့မဟုတ်ဆားကုသမှုနောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုနေ့၌အဖော်ရှာမတိုင်မီအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ naloxone နှိုင်းယှဉ်ကုသမှု (ဆား: မိတ်လိုက်၏ parameters တစ်ဦးနှစ်ဦး-လမ်း ANOVA [အချက်များသုံးပြီး naloxone ထိခိုက်ခြင်းရှိမရှိလိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင် (နေ့က 1 vs နေ့က 5) အဖော်ရှာ၏ပံ့ပိုးသို့မဟုတ်ဤပံ့ပိုးကူညီ (စမ်းသပ် vs နေ့က 5) ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်စေဆုံးဖြတ်ရန်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် ) နှင့်နေ့ရက်ကို (နေ့က 1, နေ့ 5, ဒါမှမဟုတ်စမ်းသပ်မှု)] နှင့်အဘို့အ Holmes-Sidak နည်းလမ်း post ကို hoc နှိုင်းယှဉ်။ အားလုံးစာရင်းအင်းစမ်းသပ်မှုအဘို့, p <0.05 ကစာရင်းအင်းသိသိသာသာရှိသည်ဟုမှတ်ယူခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှုနေ့၌စနစ် naloxone ။
နောက်ဆုံးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုနေ့၌ပြောင်းလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ naloxone ၏မရှိခြင်းကြောင့်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့ကျနော်တို့သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့စဉ် naloxone နှင့်အတူတွဲအဖော်ရှာခံသောတိရိစ္ဆာန်များမှနောက်ဆုံးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုနေ့၌ naloxone သို့မဟုတ်ဆားဖြစ်စေအုပ်ချုပ်။ အထူးသအပေါင်းတို့, တိရိစ္ဆာန်များ 10 ရက်ဆက်တိုက်ကာလအတွင်းတဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်မှ 30 မိကြိုတင်မိတ်လိုက် (5 / ကီလိုဂရမ်, SC mg) naloxone ဆေးထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုနေ့တှငျ7အကြာတွင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဝက်တိရစ္ဆာန် naloxone တစ်ဦးဆေးထိုး (10 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်လက်ခံရရှိdn = 7) သို့မဟုတ်ဆား (n တစ်ဦးကျခံအမျိုးသမီး၏နိဒါန်းမတိုင်မီ = 6) 30 မိ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလေ့လာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ naloxone နှိုင်းယှဉ်ကုသမှု (ဆား: မိတ်လိုက်၏ parameters တစ်ဦးနှစ်ဦး-လမ်း ANOVA [အချက်များသုံးပြီး naloxone ထိခိုက်ခြင်းရှိမရှိလိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင် (နေ့က 1 vs နေ့က 5) အဖော်ရှာ၏ပံ့ပိုးသို့မဟုတ်ဤပံ့ပိုးကူညီ (စမ်းသပ် vs နေ့က 5) ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်စေဆုံးဖြတ်ရန်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် ) နှင့်နေ့ရက်ကို (နေ့က 1, နေ့ 5, ဒါမှမဟုတ်စမ်းသပ်မှု)] နှင့်အဘို့အ Holmes-Sidak နည်းလမ်း post ကို hoc နှိုင်းယှဉ်။ အားလုံးစာရင်းအင်းစမ်းသပ်မှုအဘို့, p <5% ကိုစာရင်းအင်းအရသိသာထင်ရှားစေသည်။
သင်တန်းနည်းပြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ရေတိုရေရှည်စကားရပ်အပေါ် naloxone ၏ဆိုးကျိုးများ။
မိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်းအဆိုပါ naloxone ၏ဆိုးကျိုးများ (10 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, SC) ကုသမှုနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် (ဆားပြီးနောက်သာ 1 ဃကောက်ယူခဲ့သည့်တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုနေ့, စဉ်အတွင်းနောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ n = 5; naloxone, n = 4) ။
စနစ် naloxone pretreatment ။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးတည်း naloxone ၏ကုသမှုထပ်ခါတလဲလဲရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်နောက်ဆုံးကုသမှုပြီးနောက်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ7ဃ၏ချို့ယွင်းခြင်းဖြစ်စေသည်, လိင်နုံတိရိစ္ဆာန်များနောက်ဆုံး naloxone ပြီးနောက်မိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှု 10 ဃမတိုင်မီရက်ဆက်တိုက်အပေါ်ငါးခုနေ့စဉ် naloxone (7 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, SC) သို့မဟုတ်ဆားထိုးလက်ခံရရှိ သို့မဟုတ်ဆားဆေးထိုး။ ဒီနောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုနေ့ရက်တွင်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မဆိုဆေးထိုးမခံမယူခဲ့ပါဘူး။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလေ့လာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ မိတ်လိုက်၏ parameters unpaired သုံးပြီးအုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် t စမ်းသပ်မှုများ။ အားလုံးစာရင်းအင်းစမ်းသပ်မှုအဘို့, p <5% ကိုစာရင်းအင်းအရသိသာထင်ရှားစေသည်။
စနစ် naloxone နှင့်လိင်ဆုလာဘ်။
လွယ်ကူချောမွေ့သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၏ပြသမှုအပေါ် naloxone ၏ attenuating သက်ရောက်မှုများအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာ naloxone သည်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဖြစ်နိုင်ခြေကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက် CPP ပါရာဒိုင်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံမရှိသောအမျိုးသားများတွင် naloxone သို့မဟုတ်ဆားထိုးဆေးထိုးပြီးချက်ချင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ CPP လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် morphine-CPP အတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ပုံစံနှင့်ဆင်တူသည်။
လိင်အပြုအမူဟာကနဦး nonpreferred အခန်းထဲကအတူတွဲခဲ့သည်။ တစ်ဦး counterbalanced ထုံးစံများတွင်တစ်ဦးချင်းစီအဟိတ်တိရစ္ဆာန် (naloxone တစ်ဦးဆေးထိုးလက်ခံရရှိn = 12) သို့မဟုတ်ဆား (n = 11) 30 မိတစ်လက်ခံအမျိုးသမီးမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုလက်ခံရရှိမီ။ မိတ်လိုက် session ရဲ့ပျမ်းမျှကြာချိန် ~13 မိခဲ့သည်။ သုတ်ရည်လွှတ်အောက်ပါတစ်မိနစ်, တိရစ္ဆာန် 30 မိများအတွက်တွဲအခန်းထားရှိခဲ့ပါသည်။ အခြားအေးစက်နေ့ရက်တွင်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် (သူတို့မိတ်လိုက်မတိုင်မီလက်ခံရရှိကိုမဆို) naloxone သို့မဟုတ်ဆားဖြစ်စေတစ်ဦးဆေးထိုးလက်ခံရရှိနှင့် 30 မိများအတွက် unpaired ခနျးထဲသို့ထားရှိခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်တစ်ဦး Post-စမ်းသပ်မှုသည် pretest မှတူညီကောက်ယူခဲ့သည်။ အခန်းထဲက preference ကိုဆုံးဖြတ်ရန်, အချိန် pretest စဉ်အတွင်းတွဲအခန်းသုံးစွဲခြင်းနှင့် Post-စမ်းသပ်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်တွဲ t စမ်းသပ်မှုများသိသိသာသာ CPP ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ pretest နဲ့ post-စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းတွဲအခန်း preference ကိုများနှင့်ခြားနားချက်ရမှတ်များ, နှင့်အချိန်ကိုနှိုင်းယှဉ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ p <0.05 သိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးအပေါ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA naloxone ၏ဆိုးကျိုးများ
အထူး VTA အတွက် EOP အရေးယူမှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို၏သက်ရောက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိခဲ့, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ငါးနေ့စဉ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများရှေ့တော်၌ထို VTA သို့ naloxone သို့မဟုတ်ဆား၏ဒေသခံပြုတ်ရည်ခံယူ။ အမူအကျင့်ပါရာဒိုင်းဟာစနစ်တကျ naloxone စမ်းသပ်မှုနှင့်ဆင်တူခဲ့သည်။ လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များတဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်သည်အထိသို့မဟုတ်5ဇမှတက် 1 ရက်ဆက်တိုက်စဉ်အတွင်းမိတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ (10 hemisphere နှုန်းμl) သို့မဟုတ်ဆားတဆယ်မိနစ်လက်ခံအမျိုးသမီးမိတ်ဆက်မှီ, အထီးကြွက် naloxone (0.5% ဆားအတွက်ဖျက်သိမ်း;; 0.9 μlအသံအတိုးအကျယ် hemisphere နှုန်း 0.5 μg / μl) ဖြစ်စေ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်တာဟာလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ နှစ်နိုင်ငံ microinjections ပျံ့နှံ့ဘို့ရာအရပျ၌ကနျြထိုး cannula နှင့်အတူတစ်ဦးအပိုဆောင်း 0.5 မိလိုက်တဲ့ 1 မိကြားကာလကျော် 1 μl / မိနစ်တစ်စီးဆင်းမှုနှုန်းအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဆေးထိုး cannula ထို့နောက် Dummy cannula နှင့်ဖုန်မှုန့်ထုပ်ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်မိတ်လိုက် (စမ်းသပ်မှုနေ့က) ၏နောက်ဆုံးတစ်နေ့ပြီး, ရှိသမျှတိရိစ္ဆာန်များ naloxone သို့မဟုတ်ဆားတစ်ခုပြုတ်ရည်မပါဘဲသုတ်ရည်လွှတ်မှတခါပိုပြီး mated ။ ပုံ 3A စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ စနစ်တကျ naloxone စမ်းသပ်မှုထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒေတာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကောက်ယူခဲ့သည်။
အထီးကြွက် ketamine (0.1 / ml ကို mg) နှင့် xylazine (0.87 / ml ကို mg) ၏တစ်ဦး intraperitoneal ဆေးထိုး (0.13 ml / ကီလိုဂရမ်) နှင့်အတူ anesthetized နှင့် stereotaxic ယန္တရား (Kopf တူရိယာ) သို့နေရာချပေးခဲ့သည်။ နှစ်နိုင်ငံ 21-gauge လမ်းညွှန် cannulas (ပလတ်စတစ်တစ်ခုမှာ) ± 4.8 မီလီမီတာ ML အညီဦးခေါင်းခွံ၏ထိပ်ကနေ bregma နှင့် -0.75 မီလီမီတာ DV မှစ. , -7.8 မီလီမီတာ AP မှာ VTA ဆီသို့ဦးနှောက်သို့ဦးခေါင်းခွံထဲမှာသေးငယ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွင်းမှတဆင့်လျှော့ချခဲ့သည် Paxinos နှင့် Watson (2013)။ Cannulas ဦးခေါင်းခွံသို့သတ်မှတ်ထားသုံး screw နှစ်ခုမှလိုက်နာကြောင်းသွားဘက်ဆိုင်ရာ acrylic နှင့်အတူလုံခြုံခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များတစ် 2-တပတ်ပြန်လည်နာလန်ထူကာလပေးခဲ့နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစမ်းသပ်စဉ်အတွင်းအသုံးပြုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ဆေးထိုးလုပျထုံးလုပျနညျးမှလေ့နေ့စဉ်ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ cannulas ၏နေရာချထား TH-immunostaining အဆိုပါ VTA တိကျစွာပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်အတည်ပြုပေးရန်သုံးပြီးလေ့လာခဲ့သည်။ အတွေ့အကြုံရှိဆား: လျော်သောနေရာချထားမှုကိုနှင့်အတူသာလျှင်တိရိစ္ဆာန်များဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (နောက်ဆုံးအုပ်စုသည်အရွယ်အစားတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည် n = 8; ကြုံတွေ့ naloxone n = 6) ။ အဆိုပါ VTA အပြင်ဘက်ညွှန်ကြားအချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA naloxone ထိုးခံသောသုံးခုထပ်တိုးတိရိစ္ဆာန်များကို "လွဲချော်" ဆေးထိုးအုပ်စုတွင်အတူတကွအုပ်စုဖွဲ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလွဲချော်အုပ်စုသည်ခန္ဓာဗေဒထိန်းချုပ်မှုနှင့်မန်း-Whitney အဖြစ်အစေခံရန်သီးခြားစီဆန်းစစ်ခဲ့သည် U စမ်းသပ်မှု naloxone နှင့်ဆား-ကုသအတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသားများနှင့်အတူနောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုနေ့၌အပြုအမူနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။
မိတ်လိုက်-ဆက်စပ် Contextual cue-သွေးဆောင်အခွင့်အရေးစကားရပ်
ကူထီးဝယ်ယူမိတ်လိုက်အတွေ့အကြုံကို (VTA နှင့် NAc အတွက် Mor အဆိုပါ VTA အတွက် activation နှင့်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်စေရန်ပြသခဲ့ပြီးသောလှောင်အိမ်မှ exposureBalfour et al ။ , 2004) ။ ထို့ကွောငျ့မိတ်လိုက်ပတ်ဝန်းကျင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်တစ်ခု conditional cue ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကနေစဉ်အတွင်း Mor activation နောက်ဆက်တွဲ conditional cue-သွေးဆောင်အာရုံကြော activation ဘို့လိုအပ်ပါသည်ရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ Naloxone သို့မဟုတ်ဆားစနစ်မိတ်လိုက်နယ်ပယ်တွင်နှင့် (အတွေ့အကြုံရှိ) အဖော်ရှာများအတွက်လက်ခံအမျိုးသမီး၏နိဒါန်းတွင်နေရာချထားမတိုင်မီ (ip) 30 မိအုပ်ချုပ်ခွင့်, သို့မဟုတ် (ကြားနေအမျိုးသမီး၏တင်ဆက်မှုမပါဘဲကိုင်တွယ်လှောင်အိမ်ထဲမှာနေရာချထားပါဝင်သည်သောထိန်းချုပ်မှုကိုင်တွယ်မတိုင်မီခဲ့သည် ပတ်ဝန်းကျင်; နုံ) ။ ထို့ကြောင့်လေးစမ်းသပ်အုပ်စုများဖန်တီးခဲ့ကြသည်: နုံ Sal, နုံ NLX, Exp Sal ​​နှင့် Exp NLX ။ အခြားတစ်ဝက်ထိတွေ့မခံခဲ့ရသော်လည်း: သို့မဟုတ်လှောင်အိမ်ကိုင်တွယ် (nonsalient / ကြားနေတွေကိုနုံယောက်ျား): တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်နောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုပြီးနောက်, တစ်ဦးချင်းစီအုပ်စုဝက်တိရစ္ဆာန်မိတ်လိုက်လှောင်အိမ် (လိင်-ဆက်စပ်အေးစက်တွေကို Exp အထီး) ထိတွေ့ခဲ့သည် အစားမဆိုတွေကိုနှင့် (အခြေခံအခွင့်အရေးစကားရပ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်) အိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ 8 အုပ်စုများကိုထုတ်လုပ်ဒါကစမ်းသပ်ပါရာဒိုင်း: နုံ Sal-အဘယ်သူမျှမ Cue, နုံ Sal + Cue, နုံ NLX-အဘယ်သူမျှမ Cue, နုံ NLX + Cue, Exp Sal-အဘယ်သူမျှမ Cue, Exp Sal ​​+ Cue, Exp NLX-အဘယ်သူမျှမ Cue, Exp NLX + Cue (n နုံ NLX-အဘယ်သူမျှမ Cue မှလွဲ. =4စီ n = 3) ။ တိရစ္ဆာန်များ cue ထိတွေ့ပြီးနောက် 10-15 မိ perfused ခဲ့ကြသည်။ ထိန်းချုပ်ရေးတိရိစ္ဆာန်များဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်လှောင်အိမ်ကနေဖယ်ရှားခြင်းနှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်း perfused ခဲ့ကြသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ Sectioning နှင့် immunohistochemistry ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ p42 နှင့် p44 သည့် MAP Kinases ERK1 နှင့် ERK2 (; 1 4; ဆဲလ် signal နည်းပညာ 000 အခွင့်အရေး) ဆန့်ကျင်နေတဲ့ယုန် polyclonal antibody ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါမူလတန်း antibody ကိုကျယ်ပြန့်ခြင်း (စာပေအတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာထားပြီးRoux နှင့် Blenis, 2004; Murphy နဲ့ Blenis, 2006; Frohmader et al ။ , 2010b) ။ ထို့ပြင်မူလတန်း antibody ကို၏ပျက်ကွက်အားလုံး immunoreactivity နှင့်ကြွက်ဦးနှောက်တစ်သျှူးတွေရဲ့အနောက်တိုင်းချေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင့်လျော်သောမော်လီကျူးအလေးမှာနှစ်ခုခညျြအနှောထင်ရှားတားဆီး။
အခွင့်အရေး-immunoreactive (-IR) ဆဲလ်တစ်ဦးမှပူးတွဲပါတဲ့ကင်မရာ lucida ဆွဲပြွန်ကိုအသုံးပြုပြီးဦးနှောက်ဒေသများတစ်အရေအတွက်ရေတွက်ခဲ့သည် Leica DMRD ဏု: NAc [core ကို (C) နှင့် shell ကို (S); 400 600 μm×; medial prefrontal cortex; mPFC; anterior cingulate ဧရိယာ (ACA); prelimbic cortex (PL); infralimbic cortex (IL); နှင့် basolateral amygdala (BLA; 600 × 800 μm;; 800 μmတစ်ဦးချင်းစီ] caudate-putamen (800 × 900 μmက CP) × 1200 Balfour et al ။ , 2004; Frohmader et al ။ , 2010b; အိုး et al ။ , 2010b) ။ နှစ်ဦးအားပုဒ်မဦးနှောက်ဒေသနှုန်းကိုရေတွက်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏စံဒေသများရှိဆဲလ်များ၏နံပါတ်များကိုပြီးရင်မီလီမီတာနှုန်းဆဲလ်များ၏နံပါတ်များကိုအဖြစ်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်2။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုရေတွက်အုပ်စုတစ်စုနည်းလမ်းများ၏တွက်ချက်မှုအဘို့အတိရိစ္ဆာန်နှုန်းပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်။ နောက်တွင်: လိင်ကြုံတွေ့သို့မဟုတ်နုံအုပ်စုများအတွင်း Group မှပျမ်းမျှ ANOVA [မူးယစ်ဆေးကုသမှု (NLX သို့မဟုတ် Sal) နှင့် cue (cue သို့မဟုတ်လုံးဝမ cue) အချက်များ] Two-လမ်းကိုအသုံးပြုပြီးနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် post ကို hoc တစ်အရေးပါမှု Level ဖြင့်ဘယ်မှာသင့်လျော်သောပု Holmes-Sidak သို့မဟုတ် Mann-Whitney ပေါင်းလဒ်စမ်းသပ်မှုသုံးပြီးနှိုင်းယှဉ် p <0.05 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိသောတိရိစ္ဆာန်များ၏ NAc အခွံတွင်အချက်များ၏အရေးပါမှုဆီသို့ ဦး တည်သောပြင်းထန်သောလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဆား (Sal-No Cue) နှင့် Saline Cue (Sal + Cue) အုပ်စုများကိုသာနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားတွဲဖက်နှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ပုံများကိုတစ်တွဲတစ်ဦး CCD ကင်မရာ (Macrofire, Optronics) ကိုသုံးပြီးဖမ်းမိခဲ့သည် Leica ပုံသေကင်မရာဆက်တင်များနှင့်အတူဏု (DM5000B) ။ ပုံရိပ်တွေက Adobe Photoshop ကို 9.0 ဆော့ဖျဝဲသို့တင်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ပုံရိပ်တွေအရောင်အဝါများနှင့်ဆနျ့ကငျြဘ၏ညှိနှိုင်းမှု မှလွဲ. မည်သည့်လမ်းအတွက်ပြောင်းလဲမခံခဲ့ရပါ။
VTA dopamine ဆဲလ်တွေအတွက်လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများ
လိင်အတွေ့အကြုံကို VTA dopamine Soma အရွယ်အစားလျော့ကျမှု (သဖန်းသီး။ 1A-C ကို) ။ လိင်အတွေ့အကြုံကိုသိသိသာသာလျှော့ချဧရိယာနှင့် VTA TH-မှာ IR ဆဲလ် (ဧရိယာ၏ Soma ၏ပတ်လည်အတိုင်းအတာ: F(1,31) = 23.068, p <0.001; ပတ်လည်အတိုင်းအတာ, F(1,31) = 18.225, p <0.001) ။ အချိန်၏အဓိကသိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းရှိခဲ့သည်။ F(2,31) = 6.377, p = 0.005; ပတ်လည်အတိုင်းအတာ, F(2,31) = 4.389, p = 0.021) နှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်အချိန်အကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန် (ဧရိယာ: F(2,31) = 5.284, p = 0.011; ပတ်လည်အတိုင်းအတာ, F(2,31) = 4.347, p = 0.022) ။ Pairwise နှိုင်းယှဉ်အဲဒီဒေသမှာထင်ရှားနှင့် TH-မှာ IR ဆဲလ်များ၏ပတ်လည်အတိုင်းအတာသိသိသာသာလိင်နုံထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏နောက်ဆုံးတစ်နေ့ပြီး 1 နှင့်7ဃလျှော့ချခဲ့သည် [သဖန်းသီး။ 1B, ဧရိယာ: p = 0.002 (1 ဃ), p <0.001 (7 d); C, ပတ်လည်အတိုင်းအတာ: p = 0.009 (1 ဃ), p <0.001 (7 d)] ။ TH-IR အာရုံခံဆဲလ်အရွယ်အစားသည်ပြီးခဲ့သည့်မိတ်လိုက်ခြင်းအခမ်းအနားအပြီးတွင်အခြေခံ ၃၁dသို့ပြန်သွားသောအခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာပျောက်ကွယ်သွားသည်။သဖန်းသီး။ 1B, ဧရိယာ: p = 0.798; C, ပတ်လည်အတိုင်းအတာ: p = 0.785) ။ လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲ (အချိန်မှတ်မဆိုမှာမြို့ပတ်ရထားများတွင်တွေ့ရှိကြသည်မဟုတ်သဖန်းသီး။ 1D) ။ ငါးခြားမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းမိတ်လိုက်အတွေ့အကြုံကိုကိုလည်းလျှော့ချ VTA dopamine Soma အရွယ်အစားထုတ်လုပ်အဖြစ် VTA dopamine Soma အရွယ်အစားလျှော့ချရေး (နေ့စဉ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများအပေါ်မှီခိုမဟုတ်ခဲ့သဖန်းသီး။ 2A,B, E-H ကို, ဧရိယာ: p = 0.004; ပတ်လည်အတိုင်းအတာ: p <0.001) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်လိင်အတွေ့အကြုံသည် sustia nigra ရှိ TH-IR soma အရွယ်အစားကိုမထိခိုက်စေပါ။သဖန်းသီး။ 2C, ငါ-J ကို, ဧရိယာ: p = 0.13; ပတ်လည်အတိုင်းအတာ: p = 0.16) မဟုတ်သလိုပြောင်းလဲ Soma အရွယ်အစားအနီးအနား VTA Non-TH-မှာ IR အာရုံခံ (ထဲမှာသဖန်းသီး။ 2D, E-H ကို, ဧရိယာ: p = 0.46; ပတ်လည်အတိုင်းအတာ: p = 0.45) ။
VTA dopamine အာရုံခံ၏ Endogenous opioid-သွေးဆောင် Soma အရွယ်အစားအပြောင်းအလဲများကို။ Aနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုပြီးနောက် Soma အရွယ်အစား7ဃအတွက်လျော့ချရေးဖေါ်ပြခြင်းလိင်နုံများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိတိရစ္ဆာန်များအနေဖြင့် VTA dopamine အာရုံခံ၏, ကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေ။ စကေးဘား,5μm။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ (Exp, အနက်ရောင်ဘား) ဧရိယာ၌သိသိသာသာလျှော့ချရေးစေဖေါ်ပြခြင်း quantitative ဒေတာ (B; μmအတွက်2) နှင့်ပတ်လည်အတိုင်းအတာ (C; VTA dopamine ဆဲလ်၏) μmအတွက် Exp, 1 ဃ (နုံ; n = 6) နှင့်7ဃ (နုံ, n = 5; Exp, n = 6), မဟုတ် 31 ဃ (နုံ, n = 6; Exp, n = လိင်နုံထိန်းချုပ်မှု (နုံ, အဖြူရောင်ဘား) နဲ့နှိုင်းယှဉ်နောက်ဆုံးမိတ်လိုက်ပြီးနောက် 8) ။ ဧရိယာ 84 သို့မဟုတ် 1 ဃမှာနုံထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ယောက်ျားအတွက် 7% အထိလျှော့ချခဲ့သည်။ ပတ်လည်အတိုင်းအတာ 91.6 မှာထိန်းချုပ်မှုများနှင့် 90 ဃ resp နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအတွေ့အကြုံရှိအုပ်စုများအတွက် 1 နှင့် 7% အထိလျှော့ချခဲ့သည်။ မြို့ပတ်ရထားပေါ်မျှအကျိုးသက်ရောက်မှု (ရှိခဲ့သည်D) ။ ဧရိယာ၌ဤ dopamine ဆဲလ် plasticity (E) နှင့်ပတ်လည်အတိုင်းအတာ (F) (naloxone အားဖြင့် NLX တားဆီးခဲ့ပါတယ်, n = 8), မဟုတ်ဆား (Sal, n လိင်နုံထိန်းချုပ်မှု (Sal, နှင့်နှိုင်းယှဉ်နောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုအပြီးမိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်း = 7) ကုသမှု7ဃ n = 5; NLX, n = 6) ။ ဒေတာများကို± SEM ဆိုလိုကိုယ်စားပြု; * (ထိုနေ့၏လိင်နုံထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သိသိသာသာခြားနားချက်ကိုညွှန်ပြB, C) သို့မဟုတ်ဆား-ကုသလိင်နုံထိန်းချုပ်မှုနှင့် naloxone-ကုသလိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ (E, F).
လိင်အတွေ့အကြုံကို substantia nigra dopamine အာရုံခံသို့မဟုတ် VTA nondopamine အာရုံခံအတွက် Soma အရွယ်အစားလျော့မပေးခဲ့ပါဘူး။ VTA TH-မှာ IR အာရုံခံဆဲလျ Soma ဧရိယာ (A; μmအတွက်2) နှင့်ပတ်လည်အတိုင်းအတာ (B; ) μmအတွက်လိင်နုံ (အဖြူ) နှင့်တွေ့ကြုံ (အနက်ရောင်) တိရိစ္ဆာန်များအတွက်တစ်ပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်အဖော်ရှာခြင်းဖြင့်ထက်ရက်ဆက်တိုက်စဉ်အတွင်းအတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့ကြောင်း။ Substantia nigra TH-မှာ IR Soma ဧရိယာ (C) နှင့် VTA Non-TH-မှာ IR Soma ဧရိယာ (D)) အဖြူ (လိင်နုံအတွက်နှင့် (အနက်ရောင်) တိရိစ္ဆာန်များခံစားခဲ့ရသညျ။ ဒေတာများကို± SEM ဆိုလိုကိုယ်စားပြု; * လိင်နုံထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သိသိသာသာခြားနားချက်ဖော်ပြသည်။ လိင်နုံ၏ VTA အတွက် TH-မှာ IR (အညိုရောင်) အာရုံခံဖေါ်ပြခြင်းကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေ (E), နှင့်တွေ့ကြုံ (F) ယောက်ျား။ G, Hအဆိုပါအာရုံခံဆဲလျ၏ Higher-ချဲ့ပုံရိပ်အတွက်မြှားခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြ E နှင့် F အသီးသီး။ Nissl-စွန်းတွင် neuron သည်ဤပုံရိပ်တွေအတွက်အပြာမှာပြနေကြသည်။ လိင်နုံ၏ SN အတွက် TH-မှာ IR အာရုံခံဖေါ်ပြခြင်းကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေ (I) နှင့်တွေ့ကြုံ (J) ယောက်ျား။ စကေးဘား: E-J, 20 μm။
VTA dopamine အာရုံခံ၏လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင် Soma အရွယ်အစားလျှော့ချရေး opioid အဲဒီ receptor activation အပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါသည်
VTA ၏လျှော့ချရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ dopamine အာရုံခံဆဲလျ Soma အရွယ်အစားချင်းစီမိတ်လိုက် session တစ်ခုမတိုင်မီအုပ်ချုပ်သည့် nonselective Mor ရန် naloxone ကပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ Naloxone ကုသမှုမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများဧရိယာပေါ်တွင်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့မတိုင်မီ (F(1,22) = 4.738, p = 0.041) နှင့် (ပတ်လည်အတိုင်းအတာအပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုဆီသို့ trendedF(1,22) = 2.892, p = 0.052) ။ အတွေ့အကြုံနှင့် naloxone ကုသမှုအကြားတစ်ဦးကသိသိသာသာအပြန်အလှန် (ဧရိယာများအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်F(1,22) = 5.578, p = 0.027) နှင့်ပတ်လည်အတိုင်းအတာ (F(1,22) = 8.167, p = 0.009) ။ Pairwise နှိုင်းယှဉ် (ဆား-ကုသလိင်နုံယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုပြီးနောက် VTA dopamine အာရုံခံ7ဃ၏ဆား-ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကသိသိသာသာလျှော့ချအဲဒီဒေသမှာနှင့်ပတ်လည်အတိုင်းအတာပြသသဖန်းသီး။ 1E, ဧရိယာ: p = 0.018; F, ပတ်လည်အတိုင်းအတာ: p = 0.007) ။ ဆနျ့ကငျြ, လိင်ကြုံတွေ့ naloxone-ကုသတိရစ္ဆာန်များ (naloxone-ကုသနုံယောက်ျားကနေကွဲပြားဘူးသဖန်းသီး။ 1E, ဧရိယာ: p = 0.483; F, ပတ်လည်အတိုင်းအတာ: p = 0.330) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အတွေ့အကြုံရှိဆားတိရိစ္ဆာန်များ၏ Soma အရွယ်အစားသိသိသာသာအတွေ့အကြုံရှိ naloxone တိရိစ္ဆာန်များ (နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါယုတ်လျော့ခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 1E, ဧရိယာ: p = 0.002; F, ပတ်လည်အတိုင်းအတာ: p = 0.002) ။ တစ်ဦးတည်း naloxone ကုသမှုဆား-ကုသထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါလိင်ကနုံ naloxone-ကုသယောက်ျားအတွက် TH-မှာ IR ဆဲလ် Soma အရွယ်အစားမထိခိုက်ခဲ့ဘူးအဖြစ် naloxone ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအတွက်တိကျတဲ့ခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 1E,F) ။ မိတ်လိုက်အပြုအမူသိသိသာသာသုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်မိတ်လိုက်အစပျိုးရန်ကြာကြာအချိန် မှလွဲ. naloxone- နှင့်ဆား-ကုသအထီးအကြားကွာခြားခဲ့ပါဘူးအဖြစ်ထိုမှတပါး, အတှေ့အကွုံ-သွေးဆောင် Soma အရွယ်အစားလျှော့ချရေးအပေါ် naloxone ၏ဤအကျိုးသက်ရောက်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် naloxone ၏သက်ရောက်မှုကြောင့်မဟုတ်ခဲ့ (ပထမနှင့်ပဉ္စမမိတ်လိုက် session တစ်ခုအတွင်းမှာ naloxone-ကုသယောက်ျားအတွက် (သုတ်ရည်လွှတ်ကြားကာလ post)p = 0.03 နှင့် p အသီးသီး = 0.004,) ။ ငါးမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများတစ်ခုချင်းစီစဉ်အတွင်းသုတ်ရည်လွှတ်မှ copulated saline- နှင့် naloxone-ကုသယောက်ျားနှစ်ဦးစလုံး။
အဆိုပါ VTA အတွက် EOP ၏အရေးယူမှုအားဖြင့် VTA dopamine Soma အရွယ်အစားအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှု (exogenous opiates များအတွက်အစီရင်ခံသူတို့အားဆင်တူSklair-Tavron et al ။ , 1996; Russo et al ။ , 2007) ။ ဒါကြောင့်သဘာဝအဆုလာဘ်-သွေးဆောင် VTA dopamine ဆဲလ် plasticity အဆိုပါ opiate မော်ဖင်းအကိုက်ဘို့ဆုလာဘ်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိစမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကနာတာရှည် opiates ၏သက်ရောက်မှုဆင်တူမော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်သည်းခံစိတ်, (စေသောRusso et al ။ , 2007) ။ လိင်ကြုံတွေ့အထီး 0.5 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်မော်ဖင်းအကိုက်ထိုးများအတွက် CPP ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပျက်ကွက်; Post-စမ်းသပ်မှု (စဉ်အတွင်းဆား-တွဲအခန်းထဲကနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည့်မော်ဖင်းအကိုက်-တွဲအခန်းအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထက် သာ. ကြီးမြတ်သောငွေပမာဏကိုသုံးစွဲခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်လိင်နုံယောက်ျား, ဒီထိုးများအတွက် CPP ကဖွဲ့စည်းပြုသော်လည်းသဖန်းသီး။ 3; p = 0.039) ။ နှစ်ဦးစလုံးလိင်နုံများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိအုပ်စုများမော်ဖင်းအကိုက်ပိုမိုမြင့်မားဆေးများနှင့်အတူဆား-တွဲအခန်းထဲကနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည့်မော်ဖင်းအကိုက်-တွဲအခန်းအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုသိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ငွေပမာဏကိုသုံးစွဲ: 5.0 / ကီလိုဂရမ် Mg (သဖန်းသီး။ 3; ရင်တော့မှားမယ်: p = 0.029; Exp: p = 0.012) နှင့် 10.0 / ကီလိုဂရမ် Mg (သဖန်းသီး။ 3; ရင်တော့မှားမယ်: p <0.001; Exp: p = 0.002) ။
မော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှု။ (Mor; 0.5,5သို့မဟုတ် 10 / ကီလိုဂရမ် bodyweight mg) saline- (Sal) တွင်သုံးစွဲသို့မဟုတ်တွဲ morphine- Times သတင်းစာအခန်းများ Post-စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းလိင်နုံအတွက် (နုံ, n = 10-13) သို့မဟုတ်ကြုံတွေ့ (Exp, n = 9-13) ယောက်ျား။ SEM ±ယုတ်အဖြစ်တင်ဆက်ဖို့ဒေတာ; * တူညီတိရိစ္ဆာန်များအတွင်း Sal-တွဲအခန်းထဲကနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသိသိသာသာခြားနားချက်ဖော်ပြသည်။ သိသာထင်ရှားသောမဟုတ် NS ။
မိတ်လိုက်အပြုအမူ၏လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပံ့ပိုး opioid အဲဒီ receptor activation အပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်အရှင်ဝေး EOP အဆိုပါ VTA dopamine အာရုံခံ၏ plasticity အကြောင်းမရှိနေ့စဉ်5စဉ်အတွင်း VTA အတွက်တိုတောင်းသောမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများသရုပ်ဆောင်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်သို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေး (များ၏သက်ရောက်မှုအလားတူကြောင်းကိုသရုပ်ပြRusso et al ။ , 2007; Mazei-Robison et al ။ , 2011) ။ ကျနော်တို့ VTA dopamine Soma-အရွယ်အစားလျှော့ချရေးဆုလာဘ်သင်ယူမှုအဘို့နှင့်အထူးသလှုံ့ဆျောမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌လိင်အပြုအမူ၏လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးကူညီမှုအတွက်အရေးပါကြောင်းတွေးဆ။ ဒါဟာအယူအဆငါးပါးနေ့စဉ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအားဖြင့်သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပံ့ပိုးကူညီခြင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုအဖော်ရှာခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်စဉ်အတွင်း naloxone သုံးပြီး Mor ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ ဒေတာများအတွက်တင်ပြကြသည် ပုံ4ကိုသာပထမဦးဆုံးနှင့်ပဉ္စမမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများအဘို့ဤအကောင်းဆုံးမိတ်လိုက်အပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးကူညီဖျောပွသောဒေတာများဖြစ်ကြသည်အဖြစ်။ ထို့အပြင်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်း naloxone ကုသမှု၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ 1 တပတ်အကြာတွင်တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းမိတ်လိုက်စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း, မိတ်လိုက်အပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ ပုံ 4A စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းကိုပြသသည်။ လိင်အပြုအမူအားလုံး parameters တွေကိုအပေါ်မိတ်လိုက် session ရဲ့သိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည် (အောင်းနေချိန် mount: F(2,55) = 11.286, p <0.001; intromission အောင်းနေချိန်: F(2,55) = 8.767, p <0.001; သုက်လွှတ်အောင်းနေချိန်: F(2,55) = 10.368, p <0.001) နှင့် Mount မှအောင်းနေချိန်အပေါ် naloxone ကုသမှု (F(1,55) = 6.585, p = 0.013) နှင့် intromission (F(1,55) = 7.863, p = 0.007) ။ Pairwise နှိုင်းယှဉ် naloxone တိရိစ္ဆာန်များ (ပထမ mount မှသိသိသာသာရှည် latency ခဲ့သောကွောငျ့ naloxone ကုသမှုကိုပထမဦးဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုအတွင်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိခိုက်ကြောင်းပြသp = 0.002) နှင့် intromission (p မိတ်လိုက်၏ပထမနေ့၌ဆားထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ = 0.002) ။ ကနဦးလိင်အပြုအမူပေါ်မှာဤ naloxone အကျိုးသက်ရောက်မှု (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအားဖြင့်ယုတ်လျော့ခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများမဆိုစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိမခံခဲ့ရစားပွဲတင် 1) ။ ထို့အပွငျငါးမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများတစ်ခုချင်းစီမတိုင်မီ naloxone အုပ်ချုပ်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ကနဦးပံ့ပိုးကူညီတားဆီးခဲ့ပါဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမြား၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်း, ပြဆား-ကုသအထီး (mount မှ latency လျော့နည်းသွားသဖန်းသီး။ 4B; p = 0.032) intromission (သဖန်းသီး။ 4C; p = 0.033) နှင့်သုတ်ရည်လွှတ် (သဖန်းသီး။ 4D; p <0.001) လိင်အပြုအမူ၏ပံ့ပိုးညွှန်ပြပေးသောပထမ ဦး ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပဉ္စမမိတ်လိုက် session တစ်ခုအတွင်းမှာ။ အလားတူစွာ naloxone နှင့်ကုသသောယောက်ျားများသည်တောင်တက်ရန်သိသိသာသာတိုတောင်းသည့်ကြာချိန်ကိုပြသခဲ့သည် (သဖန်းသီး။ 4B; p <0.001), intromission (သဖန်းသီး။ 4C; p <0.001) နှင့်သုတ်ရည်လွှတ် (သဖန်းသီး။ 4D; p = ပဌမနေ့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပဉ္စမအပေါ် 0.017) ။ ထိုမှတပါး, naloxone-ကုသအထီးပဉ္စမမိတ်လိုက် session တစ်ခုစဉ်အတွင်း latency မဆိုအတွက်ဆားထိန်းချုပ်မှုကနေကွာခြားခဲ့ပါဘူး။
Endogenous opioids လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ။ A, စမ်းသပ်ဒီဇိုင်း။ B-Dဆား (Sal, အဖြူရောင်ဘားနဲ့ကုသအထီးအဘို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ parameters တွေကို, n = 11) သို့မဟုတ် naloxone (NLX; အနက်ရောင်ဘား, n စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူ = 12) ။ ပြသသည့်ဒေတာ (mount မှအောင်းနေချိန်များမှာB; စက္ကန့်), intromission (C; စက္ကန့်) နဲ့သုတ်ရည်လွှတ် (D; မိတ်လိုက်၏ငါးရက်ဆက်တိုက်၏ရက်ပေါင်း 1 နှင့်5အပေါ်စက္ကန့်) ။ ထို့အပြင်, ဒေတာနောက်ဆုံးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှု, ပဉ်စမမိတ်လိုက် session တစ်ခုပြီးနောက်7ဃများအတွက်ပြသလျက်ရှိသည်။ ဒေတာကို SEM ±ယုတ်အဖြစ်တင်ဆက်ကြသည်; + ကုသမှုအတွင်းရက်ပေါင်း 1 နှင့်5အကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကိုညွှန်ပြ; * ကုသမှုအတွင်းစမ်းသပ်နေ့နှင့်နေ့ရက်ကို5အကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကိုညွှန်ပြ; # နေ့ကအတွင်း naloxone နှင့်ဆားအုပ်စုများအကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ဖော်ပြသည်။
Naloxone အုပ်ချုပ်ရေးကြိုတင်သာမိတ်လိုက်၏ပထမနေ့၌ mount နှင့် intromission တိုးမြှင် latency အဖော်ရှာရန်
ဆနျ့ကငျြ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံက session တစ်ခုအတွင်းမှာ naloxone ကုသမှုနောက်ဆုံးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုနေ့၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှောင့်အယှက်ပြုလေ၏။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုနေ့ naloxone ဆေးထိုး၏မရှိခြင်းအတွက်နောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုပြီးနောက်7ဃကောက်ယူခဲ့သည်။ ဆား-ကုသထိန်းချုပ်မှုအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများမျှော်လင့်ထားသည့်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးကူညီပြသ။ အထူးသ mount မှ latency, intromission နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း (ပဉ္စမမိတ်လိုက် session တစ်ခုနှင့်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုနေ့ကိုအကြားကွဲပြားဘူးသဖန်းသီး။ 4B-D ကို) ။ naloxone-ကုသအထီး (mount မှ latency အတွက်သိသိသာသာတိုးပြသွားရမည်အကြောင်းသဖန်းသီး။ 4B; p = 0.033), intromission (သဖန်းသီး။ 4C; p = 0.036) နှင့်သုတ်ရည်လွှတ် (သဖန်းသီး။ 4D; p = ပဉ်စမမိတ်လိုက် session တစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါစမ်းသပ်နေ့၌ 0.049) ။ ဒါ့အပြင် (ထိုစမ်းသပ်မှုနေ့က naloxone တိရိစ္ဆာန်များရှည် latency အားဖြင့်ပြသအဖြစ် mount မှဆား-ကုသအထီးထက်သိသိသာသာနှေးကွေးဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်အပေါ်သဖန်းသီး။ 4B; p = 0.017) နှင့် intromission (သဖန်းသီး။ 4C; p = 0.043) ။ ထို့ကြောင့် naloxone ကုသမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးများ၏ကနဦး, ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးပိတ်ဆို့, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကသဘာဝဆုလာဘ်အပြုအမူအားဖြည့်များ၏ရေရှည်စကားရပ်အပေါ် EOP-သွေးဆောင် VTA dopamine အာရုံခံဆဲလျ plasticity များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍဖော်ပြသည်။
အများအပြားကနောက်ထပ်ထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်ချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ရေရှည်အားဖြည့်ဆုံးရှုံးမှုအပေါ် opioid အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ (နောက်ဆုံးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုနေ့၌ naloxone အုပ်ချုပ်ရေး၏မရှိခြင်းကနေလွတ်လပ်သောဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်ကောက်ယူခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 5A,Bမိတ်လိုက်ပံ့ပိုးကူညီ၏), ရေရှည်ဆုံးရှုံးမှုမှတိကျတဲ့ခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်မရကာလတိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (သဖန်းသီး။ 5E,F), (တစ်ဦးတည်း naloxone မှနေ့စဉ်ထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားမသဖန်းသီး။ 5C,D), နှင့် (naloxone-ကုသယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်တစ်ခုဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတာမသဖန်းသီး။ 5G,H) ။ ပထမဦးစွာနောက်ဆုံးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုအပေါ်ပြောင်းလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ naloxone ၏မရှိခြင်းကြောင့်မဟုတ်ခဲ့, ဖြစ်စေ naloxone သို့မဟုတ်ဆား (သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့စဉ် naloxone နှင့်အတူတွဲအဖော်ရှာခံသောတိရိစ္ဆာန်များမှနောက်ဆုံးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုနေ့၌အုပ်ချုပ်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွဖို့သဖန်းသီး။ 5A) ။ mount မှ latency အပေါ်မိတ်လိုက်တစ်နေ့တာသိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (ရှိခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 5B; F(2,27) = 30.031, p = 0.038) နှင့် intromission (စားပွဲတင် 2; F(2,27) = 10.686, p = 0.048) ။ သုတ်ရည်လွှတ်မှအောင်းနေချိန်အပေါ်မိတ်လိုက်တစ်နေ့တာမျှအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (ရှိခဲ့သည်စားပွဲတင် 2; F(2,27) = 2.388, p = အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့မှအလားတူ 0.109), မိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်း naloxone ကုသမှုကနဦးငါးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပံ့ပိုးကူညီမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများ (saline- နှင့် naloxone-ကုသအုပ်စုများနောက်ဆုံးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းလက်ခံရရှိကုသမှုကဆုံးဖြတ်သကဲ့သို့, နှစ်ဦးစလုံးမိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်း naloxone လက်ခံရရှိ) (နေ့က5နှင့်နှိုင်းယှဉ်နေ့က 1 အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ facilitated နှင့်ပထမဦးဆုံး mount မှသိသိသာသာတိုတောင်း latency ပြသခဲ့သည်သရုပ်ပြသဖန်းသီး။ 5B; ဆား: p = 0.033; naloxone: p = 0.014) နှင့် intromission (စားပွဲတင် 2; ဆား: p = 0.034; naloxone: p = 0.026) ။ နောက်ဆုံးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုနေ့၌ naloxone သို့မဟုတ်ဆားဖြစ်စေလက်ခံရရှိကြောင်းတိရစ္ဆာန်များ (mount မှမဟုတ်တော့ latency ခဲ့သဖန်းသီး။ 5B; ဆား: p = 0.018; naloxone: p = 0.029) နှင့် intromission (စားပွဲတင် 2; ဆား: p = 0.019; naloxone: p မိတ်လိုက်အတွေ့အကြုံ၏ပဉ်စမနေ့နဲ့နှိုင်းယှဉ် = 0.020) ။ ထို့ကြောင့်, ချက်ချင်းမိတ်လိုက်ရှေ့တော်၌ထိုစမ်းသပ်မှုနေ့၌ naloxone သို့မဟုတ်ဆား၏အုပ်ချုပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအစည်းအဝေးများကာလအတွင်း naloxone ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမပြုခဲ့ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ရေရှည်ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၏ကို attenuation မဆိုဆေးထိုးမခံမယူခဲ့ပါတိရိစ္ဆာန်များမှာပြထားတဲ့ကြောင်းမှတူညီခဲ့သည် နောက်ဆုံးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုနေ့၌ (သဖန်းသီး။ 4).
Endogenous opioids လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးများ၏ရေရှည်စကားရပ်အတွက်အရေးကြီးလှသည်။ A, စမ်းသပ်မှုနေ့၌ NLX ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှစမ်းသပ်မှုများအတွက်စမ်းသပ်ဒီဇိုင်း။ B, ဆား (မီးခိုးရောင်) သို့မဟုတ် naloxone (အနက်ရောင်) ဆေးထိုးအောက်ပါမိတ်လိုက်နှင့်နောက်ဆုံးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုနေ့၏ငါးရက်ဆက်တိုက် (စမ်းသပ်) ၏ရက်ပေါင်း 1 နှင့်5အပေါ်တောင်ပေါ်မှာအောင်းနေချိန်။ ဒေတာများကို± SEM ဆိုလိုကိုယ်စားပြုသည်။ * ကုသမှုအတွင်းတစ်နေ့လျှင် 1 နေ့5အကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ဖော်ပြသည်။ # ကုသမှုအတွင်းစမ်းသပ်ခြင်းနေ့နှင့်နေ့5အကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ဖော်ပြသည်။ Cမိတ်လိုက်အပြုအမူအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမပါဘဲတစ်ဦးတည်း naloxone Pre-ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့စမ်းသပ်မှုများအတွက်, စမ်းသပ်ဒီဇိုင်း။ D, နောက်ဆုံးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုနေ့၌တောင်ပေါ်ကအောင်းနေချိန်, မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက်ဆားသို့မဟုတ် naloxone ဆေးထိုးဖြစ်စေ၏7ရက်ပေါင်းအောက်ပါ5ရက်။ ဒေတာများကို± SEM ဆိုလိုကိုယ်စားပြုသည်။ Enaloxone ကုသမှုလိင်အတွေ့အကြုံရှိတိရိစ္ဆာန်များအတွက်သင်တန်းနည်းပြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ရေတိုရေရှည် display ကိုထိခိုက်ခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့စမ်းသပ်မှုများအတွက်, စမ်းသပ်ဒီဇိုင်း။ F, နေ့ 1 နှင့်မိတ်လိုက်နှင့်နောက်ဆုံးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုနေ့၏ငါးရက်ဆက်တိုက်၏နေ့ 5, ဆား (မီးခိုးရောင်) သို့မဟုတ် naloxone (အနက်ရောင်) ဆေးထိုး၏ရှေ့တော်၌နေ့က 1 ပြီးနောက်5နေ့၌တောင်ပေါ်ကအောင်းနေချိန်။ ဒေတာများကို± SEM ဆိုလိုကိုယ်စားပြုသည်။ * ကုသမှုအတွင်းတစ်နေ့လျှင် 1 နေ့5အကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ဖော်ပြသည်။ Gnaloxone ကုသမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုပိတ်ဆို့ထားရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့စမ်းသပ်မှုများအတွက်, စမ်းသပ်ဒီဇိုင်း။ H, အချိန် pretest (အဖြူ) နှင့်မိတ်လိုက်မတိုင်မီ naloxone သို့မဟုတ်ဆားဖြစ်စေလက်ခံရရှိတိရစ္ဆာန်များအဘို့ Post-စမ်းသပ်မှု (အနက်ရောင်) ကာလအတွင်း (စက္ကန့်) မိတ်လိုက်တွဲအခန်းနေခဲ့ရသည်။ ဒေတာများကို± SEM ဆိုလိုကိုယ်စားပြု; * pretest နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသိသိသာသာခြားနားချက်ဖော်ပြသည်။
ပြသဒေတာများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ရေရှည်အားဖြည့်ဆုံးရှုံးမှုအပေါ် Mor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏သက်ရောက်မှုနောက်ဆုံးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုနေ့၌ naloxone အုပ်ချုပ်ရေး၏မရှိခြင်းကနေလွတ်လပ်သောဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်ကောက်ယူထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်ချက်ကနေ intromission နှင့်သုတ်ရည်လွှတ် (စက္ကန့်) မှ latency များမှာ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတွဲနှင့် naloxone နှုန်း se ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲမဟုတ်အခါနောက်ဆုံးကုသမှုပြီးနောက်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ7ဃ၏ချွတ်ယွင်းစေသောကြောင့် naloxone ကုသမှုခဲ့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, လိင်နုံတိရိစ္ဆာန်များတစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုမပြုလုပ်မီ naloxone သို့မဟုတ်ဆားထိုးငါးခုနေ့စဉ်ဆေးထိုးဖြစ်စေလက်ခံရရှိ7(နောက်ပိုင်း dသဖန်းသီး။ 5C) ။ အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု (ဆားနှင့် naloxone pretreated အုပ်စုများအကြားမည်သည့်မိတ်လိုက် parameter သည်များအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 5D; အောင်းနေချိန် mount; intromission အောင်းနေချိန်: naloxone 139.7 ± 40.3 vs 121.83 ±ဆား 42.55; သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန်: naloxone 887.9 ± 70.0 vs 1050.8 ±ဆား 327.31) ။ ဤရလဒ်သည်တစ်ဦးတည်း naloxone VTA dopamine အာရုံခံဆဲလျ plasticity အပေါ်တစ်ဦးတည်း naloxone ၏သက်ရောက်မှုမရှိခြင်းဆင်တူနောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, ပြောင်းလဲပစ်ရန်လုံလောက်သောမဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံဝယ်ယူစဉ်အတွင်း naloxone ကုသမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးများ၏ရေရှည်စကားရပ် disrupts ကြောင်း hypothesize ။ ဒီထပ်မံစမ်းသပ်ဖို့, မိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်း naloxone ကုသမှု၏သက်ရောက်မှုနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် (စမ်းသပ်ဆဲဒီဇိုင်းပြီးနောက်သာ 1 ဃကောက်ယူခဲ့သည့်တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှု, စဉ်အတွင်းနောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြသည် ဟူ. ၎င်း, သဖန်းသီး။ 5E) ။ တောင်ပေါ်မှာမိတ်လိုက်တစ်နေ့တာသိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (ရှိခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 5F; F(2,20) = 19.780, p <0.001) နှင့် intromission latency (စားပွဲတင် 2; F(2,20) = 19.041, p <0.001) ။ သုတ်ရည်လွှတ်မှုနောက်ကျခြင်းအပေါ်တစ်နေ့တာ၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။စားပွဲတင် 2; F(2,20) = 3.042, p = 0.070) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ဆင်တူအပေါင်းတို့, အထီးကို (ဆားသို့မဟုတ် naloxone ကုသနေသော်လည်း) mount မှသိသိသာသာတိုတောင်း latency အားဖြင့်ညွှန်ပြငါးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပံ့ပိုးကူညီပြသ (သဖန်းသီး။ 5F; ဆား: p = 0.002; naloxone: p = 0.018) နှင့် intromission (စားပွဲတင် 2; ဆား: p = 0.006; naloxone: p တစ်ရက် 0.009 နှင့်နှိုင်းယှဉ်နေ့က5အပေါ် = 1) ။ အလားတူပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ mount မှသိသိသာသာတိုတောင်း latency အားဖြင့်ညွှန်ပြတစ်ရက် 1 (နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါစမ်းသပ်နေ့၌သရုပ်ပြခဲ့သည် facilitatedသဖန်းသီး။ 5F; ဆား: p = 0.001; naloxone: p = 0.020) နှင့် intromission (စားပွဲတင် 2; ဆား: p = 0.004; naloxone: p = 0.009) ။ ဒီနောက်ဆုံးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုနေ့၌ naloxone ကုသမှုလွတ်လပ်သော, လိင်အတွေ့အကြုံကိုပြီးနောက် 1 ဃစမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ပို. အရေးကြီးသည်, မိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်း naloxone ကုသမှုသိသိသာသာလိင်အပြုအမူ၏လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် naloxone ၏သက်တမ်းတိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် naloxone ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်၊ naloxone ကိုမိတ်လိုက်မီချက်ချင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။သဖန်းသီး။ 5G), naloxone ကုသမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ပြောင်းလဲမပြုခဲ့ကြောင်းအကြံပြု။ လိင်-တွဲအခန်းသုံးစွဲသိသိသာသာတိုးမြှင့်အချိန်အားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ် saline- နှင့် naloxone-ကုသနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်သိသာထင်ရှားသော CPP ကဖွဲ့စည်းခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 5H; ဆား: p = 0.038; naloxone: p = ပု pretest နှင့်နှိုင်းယှဉ် Post-စမ်းသပ်ကာလအတွင်း 0.002) ။ ထို့ကြောင့်, naloxone လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်အကျိုးကိုပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်သင်တန်းနည်းပြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ်ထိခိုက်သက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုမထားဘူး။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏နည်းပြအဆိုပါ VTA အတွက် EOP အရေးယူမှုအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါသည်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ရေရှည်ပံ့ပိုးကူညီသွေးဆောင်ဖို့အထူး VTA အတွက် EOP လုပ်ရပ်အတည်ပြုဖို့, စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းကိုကွပ်ထားတယ် ပုံ 3A အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA naloxone တာဟာထက်စနစ်တကျထိုးနှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲခဲ့သည်။ ရလဒ်များအထက်တွင်ဖော်ပြထားစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲရန်တူညီခဲ့ကြသည်။ လိင်အပြုအမူအားလုံး parameters တွေကိုအပေါ်မိတ်လိုက်တစ်နေ့တာသိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (ရှိခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 6A, အောင်းနေချိန် mount: F(2,33) = 4.494, p = 0.019; B, intromission အောင်းနေချိန်: F(2,33) = 4.042, p = 0.027; C, သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန်: F(2,33) = 5.309, p = 0.010) နှင့် latency အပေါ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA naloxone ကုသမှု mount မှ (F(1,33) = 7.345, p = 0.011) နှင့် intromission (F(1,33) = 6.126, p = 0.019) ။ naloxone-ကုသအထီးသရုပ်ပြအဖြစ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA naloxone, မိတ်လိုက်၏5ဃကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ကနဦးအတှေ့အကွုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးကူညီတားဆီးခဲ့ပါဘူး mount မှ latency လျော့နည်းသွား (သဖန်းသီး။ 6A; p = 0.001), intromission (သဖန်းသီး။ 6B; p <0.001) နှင့်သုတ်ရည်လွှတ် (သဖန်းသီး။ 6C; p တစ်ရက် 0.001 နှင့်နှိုင်းယှဉ်နေ့က5အပေါ် = 1) ။ Naloxone-ကုသအထီး latency မဆိုအတွက်မိတ်လိုက်၏ပဉ္စမနေ့၌ဆား-ကုသယောက်ျားထံမှကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ သိသိသာသာဖြစ်ပေါ်စေစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်တူအချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA naloxone ကုသမှု, (တောင်ပေါ်မှာတိုးလာသဖန်းသီး။ 6A; p <0.001) နှင့် intromission latency (သဖန်းသီး။ 6B; p <0.001) ပထမ ဦး ဆုံးမိတ်လိုက်သောနေ့၌ (naloxone- နှင့်ဆားကုသသောအထီးကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိသည့်ကာလအတွင်း) နောက်ဆက်တွဲမိတ်လိုက်ခြင်းအစည်းအဝေးများအတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိခြင်းမရှိသောဆား - ကုသသောယောက်ျားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ မျှော်လင့်မထားသည့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုအရဤစမ်းသပ်မှု၌ဆားကုသသောအမျိုးသားများသည် (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်စမ်းသပ်မှုအားလုံးတွင်ပြသထားသည့်အတိုင်း) တောင်ပေါ်သို့မဟုတ် intromission latency များ၏စာရင်းအင်းဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားသောပံ့ပိုးမှုကိုပြသခြင်းမရှိဘဲ၊ (ဆား: p = 0.001) ။
အဆိုပါ VTA အတွက် Endogenous opioids လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်၎င်း၏ရေရှည်ထိန်းသိမ်းမှု၏အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးကူညီဖျန်ဖြေ။ ဆား (Sal, အဖြူရောင်ဘားနဲ့ကုသအထီးအဘို့အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ parameters တွေကို, n = 8) သို့မဟုတ် NLX (အနက်ရောင်ဘား, n အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူ = 6) ။ ပြသသည့်ဒေတာ (mount မှအောင်းနေချိန်များမှာA), intromission (B), နှင့်သုတ်ရည်လွှတ် (C) မိတ်လိုက်၏ငါးရက်ဆက်တိုက်၏ရက်ပေါင်း 1 နှင့်5ပေါ်မှာ။ ထို့အပြင်, ဒေတာ7ဃဆားသို့မဟုတ် naloxone ဆေးထိုး၏မရှိခြင်းအတွက်တစ်နေ့5ပြီးနောက်နောက်ဆုံးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုနေ့အဘို့ကိုပြသထားပါသည်။ ဒေတာများကို± SEM ဆိုလိုကိုယ်စားပြု; + ကုသမှုအတွင်းရက်ပေါင်း 1 နှင့်5အကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကိုညွှန်ပြ; * ကုသမှုအတွင်းစမ်းသပ်နေ့နှင့်နေ့ရက်ကို5အကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကိုညွှန်ပြ; # နေ့ကအတွင်း naloxone နှင့် Sal အုပ်စုများအကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ဖော်ပြသည်။ (; အဖြူ; naloxone, အနက်ရောင်, ဆားလွတ်သွားသောမီးခိုးရောင်) စမ်းသပ်မှု 4.60 အားလုံးကိုတိရစ္ဆာန်များအဘို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA ဆေးထိုးက်ဘ်ဆိုက်များကိုညွှန်း Coronal VTA အပိုင်း (bregma ကနေ J ကို, -5.00;; ငါ -5.25 H ကို, -5) ၏သိထားရေးဆွဲ, (Swanson ဦးနှောက်မြေပုံများမှ template ကိုရေးဆွဲသုံးပြီးSwanson, 2004) ။ Cannulas နှစ်နိုင်ငံခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်ဆေးထိုးက်ဘ်ဆိုက်များတင်ဆက်မှု၏လွယ်ကူခြင်းအဘို့အတဖက်သတ်ကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ fr, Fasciculus retroflexus; ML, Medial lemniscus; SN, substantia nigra ။
အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA naxolone ကုသမှုစနစ်တကျ naloxone ၏သက်ရောက်မှုဆင်တူလိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ facilitated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ပိတ်ဆို့။ အထူးနောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုနေ့၌ naloxone-ကုသအထီး (mount မှမဟုတ်တော့ latency ခဲ့သဖန်းသီး။ 6A; p = 0.011), intromission (သဖန်းသီး။ 6B; p = 0.010), နှင့်သုတ်ရည်လွှတ် (သဖန်းသီး။ 6C; p = 0.015) (၎င်းတို့၏ပဉ္စမမိတ်လိုက် session တစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုနေ့၌ဆား-ကုသယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသဖန်းသီး။ 6A, p = 0.006; B, p = 0.008) ။ ဆနျ့ကငျြဘ, ဆား-ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက်မိတ်လိုက်၏နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုနေ့နှင့်နေ့ရက်ကို5အကြား mount နှင့် intromission မှ latency အတွက်ကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုအနီးအနား cannulation က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူယောက်ျားသည်အတိုင်း, VTA မှ naloxone ၏ပေးပို့ဖို့တိကျတဲ့ခဲ့ကြသည်ပေမယ့် (အ VTA ပစ်မှတ်ထားမဟုတ်သဖန်းသီး။ 6D; n = 3) နောက်ဆုံးမိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုနေ့၌အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA naloxone တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဆား-ကုသထိန်းချုပ်မှုဆင်တူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ရေရှည်ပံ့ပိုးကူညီခြင်း (ML, IL = 53 ± 6.245, EL = 389 ± 299.5 နှင့်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားပြသ (ML, IL: p = 0.029; EL: p = 0.0395) ။
EOP အရေးယူလိင်-ဆက်စပ်အေးစက် cue-သွေးဆောင်အာရုံကြော activation ဘို့လိုအပ်ပါသည်
တွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီး, အရှင်ဝေး, ငါတို့အဖော်ရှာအတွေ့အကြုံနှင့်နောက်ဆက်တွဲ VTA dopamine Soma အရွယ်အစားလျှော့ချရေးနေစဉ်အတွင်း VTA အတွက် EOP activation မိတ်လိုက်ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ facilitated ၏အကျိုးဆက်သည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖို့မက်လုံးပေး salience များ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအဘို့အရေးပါဖြစ်ကြောင်း။ တွေးဆ ဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် conditional Contextual တွေကို (လိင်-ဆက်စပ် Contextual တွေကို) မှနောက်ဆက်တွဲထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအပေါ်အဖော်ရှာအတွေ့အကြုံကိုစဉ်အတွင်း opioid receptors ပိတ်ဆို့ခြင်းများ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ လိင်နုံတိရိစ္ဆာန်များလည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုထိတွေ့ခဲ့ကြပေမယ့်ဒီကြားနေတွေကိုခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့်ယခင်မိတ်လိုက်အတွေ့အကြုံကိုနဲ့ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးအဆင့်ဆင့်အိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာနေနှင့်မည်သည့်တွေကို (-No Cue) ထိတွေ့မလိင်ကြုံတွေ့နှင့်နုံထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများအတွက်ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်။ (အတည်ပြုခြင်းနှင့်ယခင်တွေ့ရှိချက်များတိုးချဲ့Balfour et al ။ , 2004), ယခင်လိင်ဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ် Contextual တွေကိုထိတွေ့သိသိသာသာကို (NAc အတွက်လိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားအတွက်အခွင့်အရေးစကားရပ်တိုးလာသဖန်းသီး။ 7) နှင့် mPFC (သဖန်းသီး။ 8A-C ကို), ဒါပေမယ့် BLA အတွက်အာရုံခံ activation ဖြစ်ပေါ်စေဘူး (သဖန်းသီး။ 8D) သို့မဟုတ် CPU (Data ပြမပါ) ။ NAc core ကိုအတွက် cue ထိတွေ့မှု၏အဓိကသက်ရောက်မှု (ရှိခဲ့သည်F(1,12) = 12.1941, p = 0.004), ACA (F(1,12) = 5.541, p = 0.038), နှင့် PL (F(1,12) = 5.241, p အဆိုပါ NAc core ကို၌ = 0.041), နှင့် naloxone ကုသမှု (F(1,12) = 6.511, p = 0.025), ACA (F(1,12) = 15.242, p = 0.002), နှင့် PL (F(1,12) = 7.336, p = 0.019) ။ သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန် (အ NAc core ကိုအတွက်ရှိခဲ့သည်F(1,12) = 10.107, p = 0.008), ACA (F(1,12) = 16.060, p = 0.002), PL (F(1,12) = 8.235, p = 0.014), နှင့် IL ((F(1,12) = 6.965, p = 0.022) ။ ပထမဦးစွာမိတ်လိုက်-ဆက်စပ် Cue ထိတွေ့မှုသိသိသာသာမဆိုတွေကိုထိတွေ့နဲ့အိမ်လှောင်အိမ် NAc core ကိုအတွက် (Exp Sal-အဘယ်သူမျှမ Cue) (ထံမှမယူခဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ဆား-ကုသလိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များ (Exp Sal ​​+ Cue) တွင်အခွင့်အရေးတိုးလာသဖန်းသီး။ 7A; p <0.001) နှင့် mPFC subregions ACA (သဖန်းသီး။ 8A; p = 0.001), PL (သဖန်းသီး။ 8B; p = 0.003), နှင့် IL (သဖန်းသီး။ 8C; p = 0.029) ။ ဆနျ့ကငျြ, ဆား-ကုသလိင်နုံတိရိစ္ဆာန်များအတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်မရခဲ့ကြရသော Contextual တွေကိုမှထိတွေ့မှု, ဦးနှောက်ဧရိယာတွင်မဆိုအခွင့်အရေးသွေးဆောင်ဘူး (နုံ Sal + Cue နုံ Sal-အဘယ်သူမျှမ Cue နှင့်နှိုင်းယှဉ်; သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 7, 8), အခွင့်အရေး၏ induction သရုပ်ပြလိင်အတွေ့အကြုံကို-ဆက်စပ်တွေကိုများ၏ထိတွေ့မှုမှတိကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ လိင်နုံသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်စေ, အိမ်လှောင်အိမ်ကနေခေါ်ဆောင်သွားနှင့်ဆားသို့မဟုတ် naloxone နဲ့ကုသခဲ့အုပ်စုများအကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုရှိကြ၏အဖြစ်ထို့အပြင်တစ်ယောက်တည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, ဦးနှောက်ဒေသတွင်မဆိုအခြေခံအခွင့်အရေးစကားရပ်ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါဘူး။
Endogenous opioid အရေးယူလိင်-ဆက်စပ်အေးစက်တွေကိုအားဖြင့်သွေးဆောင် NAc အတွက်အာရုံကြော activation ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ မီလီမီတာနှုန်းအခွင့်အရေး-မှာ IR ဆဲလ်များ၏နံပါတ်များကို2 နျူကလီးယပ်အတွက် (core ကို accumbensA) နှင့် shell ကို (Bအစည်းအဝေးများ (Exp အထီး) အဖော်ရှာသို့မဟုတ်အစည်းအဝေးများကိုင်တွယ်စဉ်ကစနစ်တကျ NLX သို့မဟုတ်ဆား (Sal) နဲ့ pretreated ခဲ့အနက်ရောင်) တိရိစ္ဆာန်များ (နုံယောက်ျား);) လိင်ကနုံ (အဖြူ) နှင့် (Exp ကြုံတွေ့ပါ။ အုပ်စုများဖြစ်စေ (; Cue-တံဆိပ်မရှိခြင်းအားဖြင့်ညွှန်ပြခြင်းမရှိပါ Cue) နုံတိရိစ္ဆာန်များအတွက် Exp ယောက်ျားနှင့်ကြားနေတွေကိုထဲမှာတွေကို-ဆက်စပ်အဖော်ရှာသော Contextual တွေကို (Cue), ထိတွေ့, ဒါမှမဟုတ်အိမ်လှောင်အိမ်ကနေခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဒေတာကို SEM ±ယုတ်အဖြစ်တင်ဆက်ကြသည်; * ဆား-pretreated မျှ cue-ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှု (နုံ Sal-အဘယ်သူမျှမ Cue နှင့် Exp Sal-အဘယ်သူမျှမ Cue) နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သိသိသာသာခြားနားချက်ကိုညွှန်ပြ; # Sal-ကုသ Cue-ထိတွေ့ Exp အုပ်စုသည် (Exp Sal ​​+ Cue) နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သိသိသာသာခြားနားချက်ဖော်ပြသည်။ မီလီမီတာနှုန်းအခွင့်အရေး-မှာ IR ဆဲလ်များ၏ကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေ2 Sal နှင့်အတူလိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျား၏ NAc core ကိုအတွက် (C, D) သို့မဟုတ် NLX (E, F) ထိုဖြစ်စေ (Cue အိမ်လှောင်အိမ် (အဘယ်သူမျှမ Cue, C, E နဲ့) မှခေါ်ဆောင်သွား, ဒါမှမဟုတ်မိတ်လိုက်-ဆက်စပ် Contextual တွေကိုထိတွေ့ကြသည် ဟူ. ၎င်း, D, F). N နုံ NLX မှလွဲ. =4အုပ်စုတိုင်း (အဘယ်သူမျှမ Cue), n =3။ AC, anterior commissure ။ စကေးဘား, 100 μm။
ပုံ 8 ။
အခြားအ VTA ပစ်မှတ်ဒေသများတွင် cue-သွေးဆောင်အခွင့်အရေးစကားရပ်အဖော်ရှာအပေါ် naloxone ၏ဆိုးကျိုးများ။ မီလီမီတာနှုန်းအခွင့်အရေး-မှာ IR ဆဲလ်များ၏နံပါတ်များကို2 လိင်နုံ (အဖြူ) နှင့်တွေ့ကြုံ (Exp; အနက်ရောင်) တွင်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းစနစ်တကျ NLX သို့မဟုတ်ဆား (Sal) နဲ့ pretreated ခဲ့ကြသည်နှင့်ဆက်စပ်တွေကို (Cue) သို့မဟုတ်အိမ်မှာလှောင်အိမ်ထိတွေ့ခဲ့တိရိစ္ဆာန်များ (အဘယ်သူမျှမတွေကို) ကို ACA အတွက် (A), PL (B), IL (C), နှင့် BLA (D) ။ ဒေတာကိုဆိုလို± SEM ကိုယ်စားပြုနေကြသည်; * ဆား-pretreated မျှ cue-ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှု (နုံ Sal-အဘယ်သူမျှမ Cue နှင့် Exp Sal-အဘယ်သူမျှမ Cue) နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သိသိသာသာခြားနားချက်ကိုညွှန်ပြ; # Sal-ကုသ cue-ထိတွေ့လိင်နုံထိန်းချုပ်မှု (နုံ Sal + Cue) နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သိသိသာသာခြားနားချက်ဖော်ပြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆ၏ထောက်ခံမှုများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကနေစဉ်အတွင်း naloxone ကုသမှုသိသိသာသာလိင်-ဆက်စပ်အေးစက်တွေကိုအားဖြင့်အခွင့်အရေးသော induction attenuated ။ ဤအ naloxone-ကုသ cue-ထိတွေ့အတွေ့အကြုံရှိယောက်ျား (Exp NLX + Cue) တွင်အခွင့်အရေးစကားရပ်အိမ်လှောင်အိမ် (နုံ Sal-အဘယ်သူမျှမ Cue သို့မဟုတ်နုံထံမှယူလိင်နုံသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများတွင်မဆိုအခြေခံအခွင့်အရေးစကားရပ်ကှာခွားဘူး NLX- အဘယ်သူမျှမ Cue) ။ ထို့အပြင် naloxone-ကုသ cue-ထိတွေ့အတွေ့အကြုံရှိယောက်ျား (Exp NLX + Cue) တွင်အခွင့်အရေးစကားရပ် (NAc core ကိုအတွက်ဆား-ကုသ cue-ထိတွေ့အတွေ့အကြုံရှိတိရစ္ဆာန်များ (Exp Sal ​​+ Cue) နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့သဖန်းသီး။ 7A; p = 0.002) နှင့် mPFC ငျဒသေ (သဖန်းသီး။ 8A, ACA: p <0.001; B, PL: p = 0.002; C, IL: p = 0.015) ။
အဆိုပါ NAc shell ကိုခုနှစ်, Two-လမ်း ANOVA ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအချက်များ cue ထိတွေ့မှုနှင့် naloxone ကုသမှုကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများလိုက်လျောခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်တစ်ဦး pairwise နှိုင်းယှဉ် (cue ထိတွေ့ခြင်းဟာ cue-ထိတွေ့မျှဆားနုံထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ဆား-ကုသလိင်အတွေ့အကြုံရှိအုပ်စုတစ်စု (Exp SAL + Cue) တွင်အခွင့်အရေးသွေးဆောင်ခဲ့ကွောငျးတငျပွခဲ့သသဖန်းသီး။ 7B; နုံ SAL-အဘယ်သူမျှမ Cue: p = 0.0163) ။
လက်ရှိလေ့လာမှု EOP, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း VTA အတွက်သဘာဝဆုလာဘ်အပြုအမူသရုပ်ဆောင်ကြောင်းပြ, VTA dopamine ဆဲလ် Soma အရွယ်အစားအတွက်ကြံ့ခိုင်ပေမယ့်ယာယီလျှော့ချရေးစေ၏။ Soma အရွယ်အစားလျှော့ချဒီပြောင်းလဲမှု VTA dopamine ဆဲလ်ဖို့တိကျတဲ့ခဲ့အကြံပြုခြင်း, အနီးအနားရှိ substantia nigra အတွက် VTA Non-dopamine အာရုံခံအတွက်မဟုတ်သလို dopamine အာရုံခံလေ့လာမခံခဲ့ရပါဘူး။ ဤသည် VTA dopamine plasticity (နာတာရှည် opiate ထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်ကြောင့်ဆင်တူပုံပေါ်Sklair-Tavron et al ။ , 1996; Russo et al ။ , 2007; Mazei-Robison et al ။ , 2011) နှင့် exogenous opiate (မော်ဖင်းအကိုက်) ဆုလာဘ်ဆင်တူသည်းခံစိတ်စေ၏။ NAc နှင့် mPFC: ကျနော်တို့ VTA ပစ်မှတ်ဒေသများတွင်ရေတိုရေရှည် (ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်-ဆက်စပ် cue-သွေးဆောင်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု (အခွင့်အရေး) VTA dopamine plasticity ရေရှည် (ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု) အတွက်အရေးပါကြောင်းသရုပ်ပြဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကသဘာဝဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်မှတ်ဉာဏ်၏မက်လုံးပေး salience ၏ရေရှည်စကားရပ်ထဲမှာ VTA dopamine plasticity များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ၏ညွှန်ပြကြသည်။
ဒါဟာကောင်းစွာမိတ်လိုက်၏စတင်မှပိုမြန်စတင်ခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်စွမ်းဆောင်ရည် (အပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပံ့ပိုးကူညီခြင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံရလဒ်များကို, မှတ်တမ်းတင်ထားသည်Balfour et al ။ , 2004; အိုး et al ။ , 2010a,b, 2012) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဤပံ့ပိုးသို့မဟုတ်အားဖြည့် (အဖော်ရှာပြီးနောက်အနည်းဆုံး 28 ဃများအတွက်ထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အိုး et al ။ , 2012) ။ ထို့အပြင်က VTA အတွက်လိင်ဆုလာဘ်အကြောင်းမရှိ Mor International ၏လိင်အမူအကျင့်များနှင့် Conditions တွေကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကိုပြသခဲ့ပြီး VTA (dopamine နဲ့ nondopamine အာရုံခံ), NAc, PFC နှင့် BLA (ထဲမှာအပါအဝင် mesolimbic စနစ်ကတစ်လျှောက်လုံးတွင် neuron activation သွေးဆောင်Balfour et al ။ , 2004, 2006) ။ ဒါဟာကောင်းစွာ VTA dopamine အာရုံခံဆုလာဘ်-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု (၏မက်လုံးပေး salience ၏သင်ယူမှုနှင့်ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှတည်တတ်၏Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998; Berridge et al ။ , 2009; Flagel et al ။ , 2011) နှင့်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းဘို့အရေးပါများမှာ (Schultz, 2010) ။ လက်ရှိတွေ့ရှိချက်ကြောင့်ဆုလာဘ်-သွေးဆောင် VTA neuroplasticity သရုပ်ပြကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအသိပညာအပေါ်ကိုချဲ့ထွင်သည်ဤလုပ်ဆောင်ချက်များကိုများအတွက်အရေးပါသည်နှင့် VTA အတွက် EOP အားဖြင့် Mor activation အပေါ်မှီခိုသည်။ ဒါဟာ EOP အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း VTA အတွက်ပြုမူသော Mor ligand ဖြစ်သောလက်ရှိမသိနိုင်ပါဘူး။ βနဲ့အတူ Endorphins နှင့် enkephalin နှစ်ဦးစလုံးအစားအသောက်စစ်ကူများအတွက်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီဖြစ်သော်လည်း (Hayward et al ။ , 2002), ဒီအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်ထူထောင်ခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အရင်ကβ-နဲ့အတူ Endorphins အာရုံခံမိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်း activated ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းပြသကြရ, မ POMC mRNA ရှိတိုးပွါးနေကြသည်; ထို့ကြောင့်ဤβနဲ့အတူ Endorphins အဖော်ရှာစဉ်အတွင်း VTA အတွက်သရုပ်ဆောင်ဟာအရေးပါ EOP (မကျမည်အကြောင်းအကြံပြုခြင်းDavis က et al ။ , 2007) ။ ဤသည် VTA dopamine plasticity လိင်ဆုလာဘ်-ခန့်မှန်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုထိတွေ့ပြီးနောက် mPFC, NAc နှင့် VTA အတွက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, VTA dopamine plasticity တိုးလာစတင်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏စွမ်းဆောင်ရည်၏ရေရှည်စကားရပ်များအတွက်အရေးပါခဲ့ပါတယ်။ (CPP ကဆုံးဖြတ်သည်) လိင်ဆုလာဘ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များရေတိုရေရှည်ပံ့ပိုးကူညီခြင်း (လိင်အတွေ့အကြုံကိုသို့မဟုတ် 1 စဉ်အတွင်းအကြာတွင် d) (အဖော်ရှာစဉ်အတွင်း Mor ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြားမှကျန်ရှိတော့သည်အဖြစ်မတူဘဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ VTA neuroplasticity hedonic တုံ့ပြန်မှုကိုမလိုအပ်ခဲ့သည်Mehrara နှင့် Baum, 1990) ။ အဲဒီအစားဒေတာ VTA dopamine neuroplasticity နောက်ဆုံးလိင်အတွေ့အကြုံကိုပြီးနောက်ရေရှည် (7 ဃ mediates ကြောင်းအကြံပြု; အိုး et al ။ , 2012လိင်ဆုလာဘ်၏ "လို" နှင့်မိတ်လိုက်တွေကိုမှလှုံ့ဆော်တုံ့ပြန်မှုမြင့်၏) ဟူသောအသုံးအနှုနျး (Miller နဲ့ Baum, 1987; Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998).
လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များကြွက်တွေမှာဘီးပြေး၏သက်ရောက်မှုဆင်တူမော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်, အခြားသဘာဝအကြိုးအပြုအမူ, naloxone ကုသမှုနှင့်အတူပိတ်ဆို့ထားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု (ရန် Cross-သည်းခံစိတ်သရုပ်ပြလက်တ et al ။ , 2001, 2002) နှင့် VTA dopamine ဆဲလ် plasticity (လက်ရှိတွေ့ရှိချက်) အပေါ်မှီခိုဖြစ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်။ သဘာဝကဆုလာဘ်, VTA dopamine Soma အရွယ်အစားတစ်ယာယီလျှော့ချရေးအတွက် opiates မော်ဖင်းအကိုက်သို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူရလဒ်များကိုမှထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှု (ဆင်တူSklair-Tavron et al ။ , 1996; Spiga et al ။ , 2003; Russo et al ။ , 2007; Mazei-Robison et al ။ , 2011) ။ ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ခံရမူးယစ်ဆေးများပိုမိုမြင့်မားဆေးများအားဖြင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရအဖြစ်ထိုမှတပါး, တိုတောင်းဆုတ်ခွာကာလနှင့်အတူ opiate ထိတွေ့မှု (ဆုလာဘ်သည်းခံစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်Shippenberg et al ။ , 1987; Russo et al ။ , 2007), နှင့်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုမြင့်လာရန် Self-စီမံခန့်ခွဲတိရိစ္ဆာန်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (Ahmed က et al ။ , 2000; Walker က et al ။ , 2003) ။ ထို့ကွောငျ့အ EOP နှင့် opiates (ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုအားဖြင့်ဆွတန်ပြန်ဖို့အစားထိုး homeostatic ယန္တရားကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ, သောအစောပိုင်းရုပ်သိမ်းစဉ်အတွင်းဆုလာဘ်သည်းခံစိတ်သွေးဆောင်ဘုံအာရုံကြောအလွှာအပေါ်ပြုမူKoob နှင့် Le Moal, 2005) ။ ဆနျ့ကငျြ, ရေရှည် opiate မူးယစ်ဆေး abstinence ကာလအတွင်းသည်းခံစိတ်ကို (မူးယစ်ရန်ကြိုးဂုဏ်သတ္တိများတစ်ခု sensitivity ကိုမှပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်Harris ကနှင့် Aston-ဂျုံးစ်, 2003; Aston-ဂျုံးစ်နှင့် Harris က, 2004; Harris ကနှင့် Gewirtz, 2004) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ 7-28 ဃ၏လိင် abstinence ကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ (psychostimulant အကျိုးသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive စေတွေ့ရှိထားသည်အိုး et al ။ , 2010a), မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် deltaFosB စကားရပ်နှင့် NAc အတွက် dopamine အဲဒီ receptor 1 activation အပေါ်မှီခိုသောအရာ (အိုး et al ။ , 2013) ။ မော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်သည်းခံစိတ်ပေါ်တွင်ကြာကြာလိင်ဆက်ဆံ abstinence ကာလကိုစမ်းသပ်ခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲပေမယ့်ဒါကွောငျ့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်အတွေ့အကြုံ, တစ်ပြိုင်နက် opiate ဆုလာဘ်သည်းခံစိတ်နှင့် psychostimulant ဆုလာဘ်ာင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ VTA EOP အရေးယူမှုနှင့် dopamine plasticity အဆိုပါ opiate ဆုလာဘ်သည်းခံစိတ် (လက်ရှိလေ့လာမှု) ဖျန်ဖြေ, NAc deltaFosB စကားရပ် psychostimulant ာင်းကိုထိန်းချုပ်ထားသော်လည်း: ကျနော်တို့မူးယစ်ဆုလာဘ်ဒီဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုများ mesolimbic စနစ်၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိအာရုံကြော plasticity ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကကမကထပြုခဲ့စေခြင်းငှါ positive (အိုး et al ။ , 2013) ။ ဤအဖြစ်ရပ်များနှစ်ယောက်စလုံး (မူးယစ်ဆေးယူ၏အရေးအခင်းအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်Ahmed ကနှင့် Koob, 1998, 1999; Ahmed က et al ။ , 2000, 2002, 2003; Walker က et al ။ , 2003).
EOP သဘာဝကဆုလာဘ်အပြုအမူစဉ်အတွင်း VTA dopamine အာရုံခံသြဇာလွှမ်းမိုးရာအားဖြင့်မော်လီကျူးယန္တရားများမသိသောရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ IRS2-Akt-mTORC2 လမ်းကြောင်းထပ်ခါတလဲလဲမော်ဖင်းအကိုက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက် VTA အတွက်လျော့နည်းသွား Soma အရွယ်အစား (၏အဓိကအာမခံJaworski et al ။ , 2005; Russo et al ။ , 2007; Mazei-Robison et al ။ , 2011) ။ အဆိုပါ VTA အတွက် dopamine အာရုံခံ၏အရွယ်အစားအတွက်ထပ်ခါတစ်လဲလဲမော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေးသွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက် (BDNF ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA တာဟာအားဖြင့်တားဆီးနိုင်ပါတယ်; Sklair-Tavron နှင့် Nestler, 1995) ။ BDNF (TrkB အချက်ပြမှတဆင့်ဒီလမ်းကြောင်းမြှင့်လုပ်ဆောင်Russo et al ။ , 2007မြင့်မားသော BDNF အဘို့အဆှဖှေဲ့နှင့် IRS2-Akt လမ်းကြောင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းနှင့်အတူ), တစ်အဲဒီ receptor kinase (Seroogy နှင့်သည်းခြေ, 1993; Numan နှင့် Seroogy, 1999), နှင့် VTA အတွက် dopamine နဲ့ဂါဘမြို့သားအာရုံခံအပေါ်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကိုဗီဇလွှဲပြောင်းနည်းပညာတူတဲ့နာတာရှည် opiate ထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုကို အသုံးပြု. IRS2-Akt လမ်းကြောင်း၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများ Downregulation ။ ထို့အပွငျ opiate ထိတွေ့မှု၏ဆိုးကျိုးများ (ဒီအချက်ပြလမ်းကြောင်းပြန်လည်ကယ်ဆယ်ရနိုင်Russo et al ။ , 2007) နှင့် mTORC2 ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ overexpression (မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် VTA dopamine Soma လျှော့ချရေးကိုကာကွယ်တားဆီးMazei-Robison et al ။ , 2011) ။ ထို့ကြောင့်, VTA dopamine Soma အရွယ်အစားပေါ်နာတာရှည် opiates ၏ဆိုးကျိုးများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးယခင်အလုပ် (အ IRS2-Akt-mTOR လမ်းကြောင်း၏မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် downregulation ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်လုံလောက်သောနှင့်လိုအပ်သောနှစ်ဦးစလုံးသည်ကိုပြသMazei-Robison နှင့် Nestler, 2012) ။ ထို့ကွောငျ့ VTA dopamine neuroplasticity အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကိုအလားတူ BDNF နှင့် IRS2-Akt-mTORC2 လမ်းကြောင်းကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ မှနျးဖို့သွေးဆောင်
နိဂုံးချုပ်မှာတော့လက်ရှိလေ့လာမှု VTA neuroplasticity ထပ်ခါတလဲလဲအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကအထူးသဖြင့်သဘာဝကြိုးအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် VTA အတွက် EOP လုပ်ရပ်တိုးချဲ့အာရုံကြောစိတ်လှုပ်ရှားပြီး hypodopaminergic စနစ်ရရှိလာတဲ့လျော့နည်း dopamine output ကိုနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့တွေးဆခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြောင်းတွေကိုတုန့်ပြန် mesolimbic သည့်စနစ်လုပ်ငန်းဆောင်တာပွောငျးလဲသော dopamine Soma အရွယ်အစား, လျှော့ချရန်။ ထို့အပွငျ VTA neuroplasticity အဆိုပါမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆုလာဘ်မှတ်ဉာဏ်အဘို့ဖြစ်သည်မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ hedonic သက်ရောက်မှုများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, သဘာဝဆုလာဘ်အပြုအမူကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ VTA neuroplasticity ဆုလာဘ် abstinence သြဇာလွှမ်းမိုးမှု opiate ဆုလာဘ်၏တိုတောင်းတဲ့ကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးစွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဖို့အားနည်းချက်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
ဇန်နဝါရီလ 12, 2014 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
တည်းဖြတ်မူမေလ 17, 2014 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
လက်ခံမေလ 20, 2014 ။
ဒါဟာသုတေသန KKP ဖို့ LMC မှကနျြးမာရေးသုတေသနကနေဒါ Institute နှငျ့သဘာဝသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာသုတေသနကောင်စီထံမှထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်
စာပေးစာယူဒေါက်တာ Lique အမ် Coolen, မစ္စစ္စပီ Medical Center မှတက္ကသိုလ်, ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်ဇီဝရူပဗေဒဌာန, 2500 မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်လမ်း, ဂျက်ဆင်, က MS 39216-4505 မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
မူပိုင်ခွင့်© 2014 စာရေးသူ 0270-6474 / 14 / 348825-12 $ 15.00 / 0
(1997) အမျိုးသားကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res Protoc 1: 203-209 ။
Ahmed က SH,
အလယ်အလတ်ကနေအလွန်အကျွံမူးယစ်စားသုံးမှုမှ (1998) ေူပာင်းလဲရေး: hedonic set ကိုအမှတ်အတွက်ပြောင်းလဲမှု။ သိပ္ပံ 282: 298-300 ။
ကြွက်များတွင်တင်းမာမှုလျှော့ချပြီးနောက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုများအတွက် set ကိုအမှတ်အတွက် (1999) Long-ရေရှည်တည်တံ့တိုးတက်လာခဲ့သည်။ Psychopharmacology 146: 303-312 ။
Walker က JR,
မူးယစ်ဆေးတင်းမာမှုများ၏သမိုင်းနှင့်အတူကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူယူဖို့လှုံ့ဆျောမှုအတွက် (2000) Persistent တိုး။ Neuropsychopharmacology 22: 413-421 ။
ကိုကင်းအသုံးပြုမှုမြင့်တက်နှင့်ဆက်စပ် hedonic allostasis များအတွက် (2002) Neurobiological သက်သေအထောက်အထား။ နတ် neuroscience 5: 625-626 ။
Lin က D:,
ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (2003) စက်လှေကား dopamine အဆင့်ဆင့် accumbens ပြောင်းလဲကင်း-သွေးဆောင်နျူကလိယပေါ်တွင်မူတည်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ J ကို Neurochem 86: 102-113 ။
Harris က GC
အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာစဉ်ကရှာကြံတိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးများအတွက် (2004) ဦးနှောက်အလွှာဟာ။ Neuropharmacology 47: 167-179 ။
ယု L ကို,
(2004) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်-ဆက်စပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုအထီးကြွက်များတွင် mesolimbic system ကိုသက်ဝင်စေ။ Neuropsychopharmacology 29: 718-730 ။
အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအောက်ပါအာရုံကြော activation မှ medial prefrontal cortex ကနေ efferents ၏ (2006) နိုင်သည့်အလားအလာ, ပံ့ပိုးမှုများကို။ neuroscience 137: 1259-1276 ။
Beitner-Johnson က D:,
Guitart X ကို,
(1992) Neurofilament ပရိုတိန်းနှင့် mesolimbic dopamine စနစ်က: ကြွက် ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်ကင်းသဖြင့်ဘုံစည်းမျဉ်း။ J ကို neuroscience 12: 2165-2176 ။
hedonic သက်ရောက်မှု, ဆုလာဘ်သင်ယူမှု, ဒါမှမဟုတ်မက်လုံးပေး salience: (1998) ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ? ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗြာ 28: 309-369 ။
"ကဲ့သို့", "လို" နှင့်သင်ယူမှု: (2009) ဆုလာဘ်၏အစိတ်အပိုင်းများချက်ကိုပိုင်းခြားစိတ်ဖြာ။ Curr Opin Pharmacol 9: 65-73 ။
Blum K သည်,
Werner T က,
Carnes S က,
Carnes P ကို,
Giordano J ကို,
အော်စကာ Berman က M,
ရွှေ M က
(2012) လိင်, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ရော့ခ် 'n' လိပ်: ဆုလာဘ်မျိုးဗီဇ polymorphic တစ် function ကိုအဖြစ်ဘုံ mesolimbic activation hypothesizing ။ J ကို Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါး 44: 38-55 ။
Meng L ကို,
Lee က Dy,
(2007) Peripheral လျှပ်စစ်ဆွဆဲလ်အရွယ်အစားလျှော့ချရေးပြောင်းပြန်နှင့်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်-ကုသကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာ၌ BDNF အဆင့်အထိတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဦးနှောက် Res 1182: 90-98 ။
Davis က BA,
, ME Fitzgerald
(2007) ယေဘုယျ arousal စဉ်အတွင်း POMC အာရုံခံ၏ Activation ဒါပေမယ့်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်အပြုအမူ။ ပြုမူနေ neuroscience 121: 1012-1022 ။
(1997) နျူကလိယအတွက် Dynamic အပြောင်းအလဲများကိုအထီးကြွက်များတွင် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုစဉ်အတွင်း dopamine efflux accumbens ။ J ကို neuroscience 17: 4849-4855 ။
Clark က JJ,
Mayo အဘိဓါန် L ကို,
Phillips က PE,
(2011) နှိုးဆွ-ဆုလာဘ်သင်ယူမှုအတွက် dopamine များအတွက်တစ်ဦးကရွေးချယ်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ 469: 53-57 ။
(2010a) အပျော်အပါးရောစပ်: လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်လိင်အပြုအမူအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများပြန်လည်သုံးသပ်။ Horm ပြုမူနေ 58: 149-162 ။
Wiskerke J ကို,
(2010b) သမ်ဖက်တမင်းအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိန်းညှိအာရုံခံ၏ subpopulations အပေါ်ပြုမူ။ neuroscience 166: 771-784 ။
Harris က AC အ,
(2004) စူးရှမော်ဖင်းအကိုက်ထံမှဆုတ်ခွာစဉ်ကထိတ်လန့်မွှငျ့တငျ: opiate ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုမော်ဒယ်။ Psychopharmacology 171: 140-147 ။
Harris က GC,
ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ကြာရှည် dysregulation အဘို့သက်သေအထောက်အထား: (2003) opiate ဆုတ်ခွာအောက်ပါလှုံ့ဆျောမှုနှင့်သင်ယူမှုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ Neuropsychopharmacology 28: 865-871 ။
beta-နဲ့အတူ Endorphins နှင့် enkephalin ချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာ (2002) ရွေးချယ်ဆုလာဘ်လိုငွေပြမှု။ J ကို neuroscience 22: 8251-8258 ။
, ME Bocarsly
Rada P ကို
(2009) သဘာဝစွဲ: ကြွက်များတွင်သကြားစွဲလမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးအမူအကျင့်များနှင့်ဆားကစ်မော်ဒယ်။ J ကိုစွဲ Med 3: 33-41 ။
စွဲလမ်း၏ (2006) ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရားများ: ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Annu ဗြာ neuroscience 29: 565-598 ။
Ikemoto S က,
အဆိုပါ anterior ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာ (1997) ဂါဘမြို့သား (က) အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ၏ extracellular အဆင့်ဆင့်တိုးပွားစေပါသည်။ J ကို Neurochem 69: 137-143 ။
Jaworski J ကို,
Spangler S က,
Hoogenraad CC ကို,
Sheng M က
rapamycin လမ်းကြောင်း၏ phosphoinositide-2005'-kinase-Akt-နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေပစ်မှတ်အားဖြင့် dendritic Arbore ၏ (3) ထိန်းချုပ်ရေး။ J ကို neuroscience 25: 11300-11312 ။
(1992) Opioids ဒေသခံ interneurons ၏ hyperpolarization အားဖြင့် dopamine အာရုံခံ excite ။ J ကို neuroscience 12: 483-488 ။
DeWitte P ကို,
တစ်ဦးအတွက် Vivo microdialysis လေ့လာမှု: opioids နှင့်ဂါဘမြို့သားအားဖြင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ somatodendritic dopamine လွှတ်ပေးရေး (1992) စည်းမျဉ်းဥပဒေ။ J ကို neuroscience 12: 2623-2632 ။
ဆုလာဘ် neurocircuitry ၏ (2005) ပလပ်စတစ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏ "မှောင်မိုက်ဘက်" ။ နတ် neuroscience 8: 1442-1444 ။
(1978) တစ်ဦးနဲ့ Immunofluorescence microscopy များအတွက် mounting အလတ်စားတိုးတက်လာသည်။ နံနက် J ကို Clin Pathol 69: 647-648 ။
, VL ပေးသနား
Koh သည် MT
(2001) Naloxone ကြွက်များတွင်ဘီးပြေးနေဖြင့်သွေးဆောင်အခြေအနေများကိုရာအရပျ preference ကို attenuates ။ Physiol ပြုမူနေ 72: 355-358 ။
Koh သည် MT,
Flynn က, G
ဘီးပြေးနှင့်အတူ (2002) မတိုင်မီကအတွေ့အကြုံကိုမော်ဖင်းအကိုက်၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှ Cross-သည်းခံစိတ်ထုတ်လုပ်သည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 72: 101-105 ။
Matthews က RT ကို,
မော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းဖြင့်ကြွက် ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အဘို့ (1984) Electrophysiological သက်သေအထောက်အထား။ neuroscience 11: 617-625 ။
Mazei-Robison က MS,
Vinish M က,
Krishnan V ကို,
Appasani R ကို,
ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံအတွက်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်အလိုက်အထိုက်နေတတ် mTOR အချက်ပြခြင်းနှင့်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအတွက် (2011) အခန်းက္ပ။ အာရုံခံဆဲလျ 72: 977-990 ။
ventral tegmental ဧရိယာ၏ (2012) Opiate-သွေးဆောင်မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာ plasticity နှင့် locus coeruleus catecholamines အာရုံခံ။ အေးနွေ Harb ရှုထောင့် Med 2: a012070 ။
(1990) Naloxone ဟူသောအသုံးအနှုနျးသော်လည်းမတစ်ဦး oestrous အမျိုးသမီးတစ် conditional ရာအရပျ preference ကိုတုန့်ပြန်၏အထီးကြွက်များအားဖြင့်ဝယ်ယူ disrupts ။ Psychopharmacology 101: 118-125 ။
(2006) အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်အတွေ့အကြုံကို: ဆယ်လူလာယန္တယားများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များ။ ဦးနှောက် Res 1126: 56-65 ။
Miller က RL,
(1987) Naloxone မကြာမီသင်းပြီးနောက်အထီးကြွက်များတွင်တစ်ခု estrous အမျိုးသမီးများအတွက်မိတ်လိုက်နှင့် conditional ရာအရပျ preference ကိုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 26: 781-789 ။
Stewart က J ကို
opiates ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA ထိုးနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ (1990) နည်းပြ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 35: 643-650 ။
Blenis J ကို
(2006) MAPK signal ကိုတိကျတဲ့: လက်ျာအချိန်တွင်ညာဘက်ရာအရပျ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲကဓာတုပစ်စညျးသိပ္ပံ 31: 268-275 ။
မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ (2012) မှတ်တမ်းယန္တရားများ။ Clin Psychopharmacol neuroscience 10: 136-143 ။
Watson ကို C
(2013) stereotaxic သြဒီနိတ် (Academic ဘော်စတွန်), Ed က7အတွက်ကြွက်ဦးနှောက်။
သဘာဝကဆုလာဘ်များနှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ် abstinence အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ mesolimbic စနစ် (2010a) Neuroplasticity ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 67: 872-879 ။
Vialou V ကို,
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် (2010b) DeltaFosB လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်ဘို့အရေးကြီးသည်။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ 9: 831-840 ။
Schmid S က,
ဝမ် X ကို,
(2012) သဘာဝဆုလာဘ်အတွေ့အကြုံကိုယင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် AMPA နှင့် NMDA အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် function ကိုပွောငျးလဲ။ PLoS တစ်ခုမှာ 7: e34700 ။
(2013) သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်တစ်ခု key ကိုဖျန်ဖြေအဖြစ် DeltaFosB နှင့်အတူဘုံအာရုံကြော plasticity ယန္တရားများအပေါ်ပြုမူ။ J ကို neuroscience 33: 3434-3442 ။
(2004) ERK နှင့် p38 MAPK-activated ပရိုတိန်း kinases: မတူကွဲပြားဇီဝလုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်အတူပရိုတိန်း kinases တစ်မိသားစု။ Microbiol Mol Biol ဗြာ 68: 320-344 ။
Renthal W က,
midbrain dopamine အာရုံခံအတွက် (2007) IRS2-Akt လမ်းကြောင်း opiates မှအမူအကျင့်များနှင့်ဆယ်လူလာတုံ့ပြန်မှုထိန်းညှိ။ နတ် neuroscience 10: 93-99 ။
dopamine အာရုံခံ၏ (2010) အကွိမျမြားစှာလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ F1000 Biol ကိုယ်စားလှယ် 2:2။
midbrain dopaminergic အာရုံခံခြင်းဖြင့် neurotrophins ၏ (1993) Expression ။ Exp Neurol 124: 119-128 ။
Bals-Kubik R ကို,
opioids ၏ (1987) စိတ်ရင်းဂုဏ်သတ္တိများ: မြစ်ဝကျွန်းပေါ်-receptors တစ်ခု activation အားဖြည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ mediates ကြောင်းသက်သေအထောက်အထား။ ဦးနှောက် Res 436: 234-239 ။
Sklair-Tavron L ကို,
(1995) စသည်တို့အတွက် locus coeruleus အာရုံခံအပေါ်မော်ဖင်းအကိုက်ဆိုးကျိုးများနှင့် neurotrophins, NT-3, NT-4 နှင့် BDNF, အတိုက်အခံ။ ဦးနှောက် Res 702: 117-125 ။
Harris က HW,
(1996) နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက် mesolimbic dopamine အာရုံခံ၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာမြင်နိုင်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 93: 11202-11207 ။
Spiga S က,
Foddai M က,
ဒိုင်ယာနာ M က
အဆိုပါ VTA အတွက် (2003) မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်မူမမှန်: confocal လေဆာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ microscopy ။ EUR J ကို neuroscience 17: 605-612 ။
(2004) ဦးနှောက်မြေပုံ: ကြွက်ဦးနှောက် (Academic, San Diego မှ) ၏ဖွဲ့စည်းပုံ, Ed က3။
Wilson က H ကို,
အထီးကြွက်များတွင် (2009) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်: သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့် intromissions နှင့်ဆက်နွယ်သောအခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေးအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏ဆိုးကျိုးများ။ Horm ပြုမူနေ 55: 93-97 ။
(2007) အခွအေနမြေားရာအရပျ preference ကို (CPP က) ပါရာဒိုင်းနှင့်အတူဆုလာဘ်တိုင်းတာခြင်း: ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်၏ update ကို။ စှဲလမျးသူ Biol 12: 227-462 ။
ဗန် Furth WR,
ဗန် Ree JM
(1996) လိင်လှုံ့ဆျောမှု: အ ventral tegmental ဧရိယာ၌ endogenous opioids ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဦးနှောက် Res 729: 20-28 ။
ပုလ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ (1995) စည်းမျဉ်းဥပဒေ: ဦးနှောက်ကို opioids ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ dopamine ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗြာ 21: 162-184 ။
Chen က SA,
Moffitt H ကို,
(2003) နာတာရှည် opioid ထိတွေ့ကြွက်များတွင်တိုးချဲ့ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးထုတ်လုပ်သည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 75: 349-354 ။
လျူ Y ကို,
ဝမ် Z ကို
(2011) pair တစုံဘွန်း၏ neurobiology: တစ်လူမှုရေးအရ monogamous ကြွက်ကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ တပ်ဦး Neuroendocrinol 32: 53-69 ။